လီးနှဈခြောငျးအထိအတှေ့ - Owl Myanmar News
အဲဒီနကေ့သောကွာနလေ့ေ။နောကျနအေ့လုပျကလဲပိတျတော့…လငျမယားနှဈယောကျ..ညဘကျကလပျကိုခြီတကျတာပေါ့။အိမျမှာကလဲ…ဧညျ့သညျတှရေောကျနတေော့… ညကလြှတျလှတျလပျလပျနလေို့ရအောငျ….ဟျောတယျမှာပဲညအိပျဖို့စီစဉျထားပွီးသား။ကလပျအပွနျညကရြငျ…ဟျောတယျမှာ ပှဲကွမျးမယျပေါ့ဗြာ။ ကလပျမှာဘျောဒါတဈယောကျနဲ့တှတေ့ယျဗြ။ဒီကောငျကလူပြိုပဲ။ဒါပမေယျ့….မိနျးမဝါသနာအရမျးကွီးတဲ့ကောငျ။ဒီကောငျ့ပုံစံက..ကစားသမားပုံစံ။တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ပဲဗြ။
ဒီကောငျက…ကနြေျာ့မိနျးမကိုတှတေို့ငျး..ဖငျတှရေငျတှကေိုကွညျ့နကွေဗြ။ဒီနမေိ့နျးမဒီဇိုငျးကိုလဲမွငျရော….ဒီကောငျ့မကျြလုံးတှဆေိုတာ… ကြှတျထှကျလာမလားမှတျရတယျ..ငမျးတာငမျးတာ။ကနြျောလဲ… ဒီနသေ့ောကျထားတဲ့အရှိနျကွောငျ့လားမသိဘူး။ဒီကောငျကွညျ့နတောကို…စိတျမဆိုးတဲ့အပွငျဒီကောငျ့ကို… ကနြေျာ့မိနျးမရဲ့နို့တှဖေငျတှကေိုပွခငျြလာတယျ။
အဲဒါနဲ့ဒီကောငျ့ရှမှေ့ာတငျ…မိနျးမကိုဖကျပွီးကဈဆငျကောကျဆှဲရငျး….လကျတဈဖကျကမိနျးမဝတျထားတဲ့… စကတျတိုတိုလေးအောကျကနနှေိုကျပွလိုကျတယျ။မိနျးမဝတျထားတဲ့စကတျက…ပေါငျရငျးနားထိရောကျတဲ့…စကတျတိုတိုလေးလေ။ အောကျကနပေငျ့နှိုကျလိုကျတာနဲ့…ဝတျထားတဲ့ဂြီစတထရငျးအောကျက…အဖုတျကိုတနျးနတောပဲ။အဲလိုလုပျရငျး… ဒီကောငျ့လှမျးရှိုးလိုကျတော့…ဒီကောငျ့ရဲ့မကျြလုံးတှကေ…ပိုပွူးလာပွီး…တံတှေးတှမွေိုခနြတောတှတေ့ယျ။ဒီကောငျ့လကျတှကေ… လကျသီးကိုဆုပျလိုကျဖှလိုကျနဲ့ဂဏာမငွိမျဖွဈနတော။
ကနြျောလဲ…ဘာကွောငျ့ရယျမသိပဲ… ဒီကောငျရဲ့ပေါငျခှကွားကိုလှမျးကွညျ့မိတယျ။လားလား..ဒီကောငျက..ကနြျောတို့လငျမယားကိုကွညျ့ပွီးလီးတောငျနတောဗြ။ကနြေျာ့မိနျးမကိုပဈမှားပွီး…..တောငျနတောဘောငျးဘီခှကွားကွီးကိုဖောငျးလို့။ ကနြျောကမိနျးမကိုကဈဆငျဆှဲနရောကနေ….နားရှကျလေးတှကေို… လြှာနဲ့အသာတို့သလိုလုပျရငျး…မိနျးမကိုကွညျ့လိုကျတော့…မိနျးမရဲ့မကျြလုံးတှကေကွာမူပါပါနဲ…ဒီကောငျ့မကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျ… ဒီကောငျ့ရဲ့ဒုတျနရောကိုလှမျးကွညျ့လိုကျနဲ့ဗြ။ မိနျးမရဲ့လကျတဈဖကျက..ကနြေျာ့ကိုဖတျထားတာ။မဖတျထားတဲ့နောကျလကျတဈဖကျက…လှုပျနပေါတယျဆိုပွီး… လကျနရောကိုလိုကျကွညျ့လိုကျတော့….ဟိုကောငျမွငျနရေတဲ့ဘကျခွမျးက… ပေါငျကိုပှတျပွနတော။သူတို့နှဈယောကျမကျြလုံးခငျြးဆုံနတောတှေ…မိနျးမကဒီကောငျ့ကိုပှတျပွနတောတှကေို… ကွညျ့ရငျးကနြျောလဲလီးတောငျလာတယျ။
တောငျတာတောငျမှ… တဈခါမှမကွုံဖူးလောကျအောငျတောငျလာတာ။သူတို့နှဈယောကျမကျြလုံးခငျြးဆုံနတောတှေ….မိနျးမကဒီကောငျ့ကိုပှတျပွနတောတှကေို …ပိုဖွဈလာအောငျလုပျခငျြစိတျတှပေျေါလာတယျ။ကလပျကအသံတှေ…ရှုပျယှကျခတျနတေဲ့လူတှေ..တဈယောကျမှမရှိတော့ဘဲ… ကနြျောတို့သုံးယောကျထဲရှိသလို ခံစားနရေတယျ။ အဲဒါနဲ့ကနြျောလဲ…ပေါငျကိုပှတျနတေဲ့မိနျးမရဲ့လကျကိုယူပွီး…စကတျအောကျကနေ… သူ့အဖုတျကိုသူပှတျခိုငျးလိုကျတယျ။ဂြီစထရငျးလေးကိုအသာဖယျပွီး…လကျတဈခြောငျးထညျ့ကွညျ့လိုကျတော့… အရတှေထှေကျနတောမှရှဲနတောပဲ။ထညျ့လိုကျတဲ့ကနြေျာ့လကျကို…ညှဈညှဈပေးနတော။ အဲဒါမြိုးညှဈပေးတာမြိုးက… ခဈြခဈြအရမျးဖီးတကျနတေဲ့… အခြိနျမြိုးမှဖွဈတာလေ။(ကနြျောမိနျးမကိုကနြျောက…ခဈြခဈြလို့ချေါတာ.)အဲဒါနဲ့ပဲ…စောကျဖုတျထဲကို… လကျနောကျတဈခြောငျးပါထပျထညျ့ပွီး…လကျနှဈခြောငျးနဲ့အသှငျးအထုတျ လုပျပေးနလေိုကျတယျ။
လူတှကွေားထဲဘျောဒါရဲ့ရှမှေ့ာ…လကျနဲ့လိုးပေးနတောမြိုးပေါ့။စောကျဖုတျထဲနှိုကျထားတဲ့လကျနှဈခြောငျးကို… ခဈြခဈြရဲ့ပါးစပျထဲထညျ့လိုကျတော့…ခဈြခဈြကကနြေျာ့လကျတှကေို…လီးစုပျသလိုစုပျပေးတယျ။ဘျောဒါကိုကွညျ့လိုကျတော့… နံရံကိုမှီပွီးဘောငျးဘီပျေါကနလေီးနရောကိုပှတျပွနတော။ မကျြလုံးတှကေတော့…ခဈြခဈြရဲ့မကျြနှာနဲ့ခဈြခဈြစကတျအောကျ… စောကျဖုတျနရောကိုသသေခြောခြာကွညျ့နတေယျ။ခဈြခဈြကိုကွညျ့တော့လဲဒီလိုပဲ။ဒီကောငျရဲ့မကျြနှာတလှညျ့… သူ့လီးနရောကိုတလှညျ့သခြောကွညျ့နတော။ခဈြခဈြရဲ့စကတျကလဲ…တျောတျောလနျနပွေီး…ဘျောဒါရဲ့နရောကကွညျ့ရငျ… ဝတျထားတဲ့ဂြီစထရငျးတောငျ….မွငျနရေလောကျတယျ။ ကနြျောလဲ…ကနြေျာ့ကိုဖကျထားတဲ့ခဈြခဈြရဲ့လကျကိုယူပွီး… ကနြေျာ့လီးကိုဘောငျးဘီပျေါကနပှေတျခိုငျးလိုကျတယျ။ကနြျောတို့ရောကျနတေဲ့နရောက… ခြောငျကပြွီးနံရံနဲ့ကပျနတေဲ့နရောလေ။ခဏနတေော့…ခဈြခဈြရဲ့လကျကိုဆှဲပွီး…ကတဲ့နရောနားရောကျအောငျဆှဲချေါလာတော့… ခဈြခဈြကိုကွညျ့ရတာ..ဆှဲချေါလာလို့သာလိုကျလာရတယျ…စောစောကနရောမှာပဲ…ဘျောဒါကိုပှတျပွခငျြနတေုံးလို့ထငျတာပဲ။
ကတဲ့နရောအစှနျနားမှာ….ခဈြခဈြကိုမကျြနှာခငျြးဆိုငျဖကျပွီးကနတေော့….ဘျောဒါလဲလိုကျလာပွီး..ခဈြခဈြနောကျကနလောကတယျ။ ပုံ စံက…မိနျးကလေးတဈယောကျကို…ရှတေ့ဈယောကျနောကျတဈယောကျညှပျထားသလိုမြိုး။ဘျောဒါက…ခဈြခဈြရဲ့နောကျကနေ… ခဈြခဈြရဲ့ဖငျတှကေိုမထိတထိနဲ့လာလာပှတျနတောကို…ကနြျောမွငျနရေတယျ။ အဲလိုကနြေျာ့မိနျးမဖငျတှကေိုလာပှတျရငျးနဲ့….ဒီကောငျကကနြေျာ့ကို…အကဲခတျနသေေးတာ။ကနြျောကမမွငျခငျြဆောငျနတေော့… ခဈြခဈြဖငျတှကေိုသသေခြောခြာလာကိုငျတော့တာပဲ။ ကနြျောလဲခဈြခဈြကို… လကျတဈဖကျထဲနဲ့ပဲဖကျပွီး….လကျတဈဖကျကစကတျအောကျကနေ… စောကျဖုတျကိုပှတျပေးလိုကျတယျ။ခဈြခဈြဘယျလောကျတောငျ… ဖီးလာနလေဲမသိဘူးစောကျဖုတျကထှကျနတေဲ့….အရတှေကေဝတျထားတဲ့..ဂြီစထရငျးကိုဖောကျကပြွီး….ကနြေျာ့လကျတှကေိုတောငျ လာစိုနပွေီ။ဘျောဒါက…ကနြျောမသိယောငျဆောငျပေးတာကိုသိလို့လားမသိဘူး…လကျတဈဖကျကခဈြခဈြရဲ့ဖငျကိုကိုငျပွီးတော့… လကျတဈဖကျကပေါငျတှကေို….ပှတျပေးနတောဗြ။
ကနြျောလဲအဲဒါကိုမွငျတော့…စိတျတှဘေယျလိုဖွဈလာမှနျးမသိပဲ။ဘျောဒါကကနြေျာ့မိနျးမကို…ကနြေျာ့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ… နှိုကျနတောကိုမွငျခငျြလာတယျ။ခဈြခဈြရဲ့စောကျဖုတျကိုပှတျနတေဲ့…ကနြေျာ့လကျနဲ့…ခဈြခဈြရဲ့ဖငျကိုပှတျနတေဲ့ဘျောဒါလကျကိုဆှဲပွီး… စကတျပျေါကနစေောကျဖုတျရှိတဲ့…နရောမှာထားပေးလိုကျတယျ။ပေါငျကိုပှတျနတေဲ့လကျကိုလဲ…နို့ပျေါကိုတငျပေးလိုကျတယျ။ ကနြျောကတော့…ခဈြခဈြရဲ့ လကျနှဈဖကျကိုပဲကိုငျပွီး… နောကျကိုနဲနဲခှာလိုကျတာပေါ့။ဘျောဒါကသူ့လီးနဲ့ခဈြခဈြဖငျတှကေို… ပှတျနတောဖွဈမယျ။ခဈြခဈြကဖငျတှကေိုနောကျကိုကော့ပွီး…စကောဝိုငျးနတောတှတေ့ယျ။ဘျောဒါရဲ့လကျတဈဖကျ… စကတျပျေါကနစေောကျဖုတျကိုပှတျ။နောကျလကျတဈဖကျ..နို့နှဈလုံးကိုပယျပယျနယျကိုကိုငျနတော။
တဈခကျြတဈခကျြလဲပေါငျအတှငျးသားတှကေို…ပှတျနတောတှတေ့ယျ။ခဈြခဈြရဲ့မကျြလုံးတှကေ…အရညျတှလေဲ့ပွီး… ကနြေျာ့ကိုစူးစူးရဲရဲကိုကွညျ့နတော။ကနြျောလဲ…အဲဒီမွငျကှငျးကိုကွညျ့ပွီး…လီးကတောငျလှနျးလို့နာတောငျနာလာတယျ။ ဒီတဈခါ… ခဈြခဈြနဲ့ဘျောဒါမကျြနှာခငျြးဆိုငျ..ပှတျနတောကိုမွငျခငျြလာတာနဲ့..ခဈြခဈြကိုကနြေျာ့ဘကျပွနျဆှဲချေါလိုကျတယျ။ဘျောဒါကကပျပွီးပါ လာလို့…ဒီကောငျ့လကျတှကေိုဆှဲဖွုတျလိုကျမှပဲ…ကနျြခဲ့တော့တယျ။ ကနြေျာ့ဆီကိုရောကျလာတဲ့…ခဈြခဈြကိုကဈဆငျဆှဲပွီး… ဖငျနှဈလုံးကိုကွမျးကွမျးလေးညှဈပေးလိုကျတယျ။ပွီးတော့… ကိုယျကိုလှညျ့ပေးလိုကျပွီး…ခဈြခဈြကိုဘျောဒါဆီပွနျတှနျးပို့လိုကျတော့… ဟိုကောငျကလဲဆီးဖကျတာပေါ့။ခဈြခဈြကလဲပွနျဖကျလိုကျတာတှတေ့ယျ။ ခဈြခဈြကဘျောဒါရဲ့ရငျခှငျထဲမှာ… ခေါငျးလေးငုံ့လို့။ဘျောဒါရဲ့လကျနှဈဖကျလုံးက…ခဈြခဈြဖငျတှကေိုညှဈနတော။ကနြျောလဲ…ဘျောဒါလကျတဈဖကျကိုဆှဲပွီး… ခဈြခဈြဘျောဒါကွားရှကေို့တှနျးပို့…နောကျလကျတဈဖကျကိုခဈြခဈြပခုံးပျေါတငျပေးလိုကျတယျ။ပွီးတော့… ခဈြခဈြရဲ့ခါးကိုစုံကိုငျပွီးသူ့ဖငျတှကေို…ကနြေျာ့လီးနဲ့ထောကျလိုကျတာပေါ့။
ခဈြခဈြရဲ့ရှကေို့ရောကျသှားတဲ့…ဘျောဒါရဲ့လကျကစကတျအောကျကနနှေိုကျလိုကျတာဖွဈမယျ။ခဈြခဈြဖငျတှနေောကျကိုပိုကော့လာပွီး… ကနြေျာ့လီးကိုစောစောကဘျောဒါကို…လုပျသလိုစကောဝိုငျးလာတယျ။တဈကယျမိုကျတယျဗြာ။ မွငျကတာကရော..ဖငျနဲ့ပှတျပေးတာရောကောငျးလှနျးလို့… ပွီးခငျြသလိုတောငျဖွဈလာလို့..မနညျးထိနျးလိုကျရတယျ။ဘျောဒါကိုဖကျထားတဲ့…ခဈြခဈြလကျတဈဖကျကိုဆှဲပွီး… ဘျောဒါရဲ့ဘောငျးဘီရှနေ့ားကို…ပို့ပေးလိုကျတော့..ခဈြခဈြကဘျောဒါရဲ့ဖောငျးနတေဲ့…ဘောငျးဘီခှကွားကိုပှတျတော့တာပဲ။ ကလပျထဲမှာသာမဟုတျရငျ…ခဈြခဈြကဘျောဒါကိုဘောငျးဘီခြှတျပွီး…လီးကိုကိုငျမလားမသိဘူး။အခုလိုဘျောဒါကိုနှိုကျခိုငျး… ဘျောဒါရဲ့လီးကိုကိုငျခိုငျးတာကို…ခဈြခဈြကမငွငျးတဲ့အပွငျဘာမှမပွောဘူး။သူကိုယျတိုငျစိတျပါလကျပါလုပျနတော။မူးနတောရော… ကနြျောမဟုတျတဲ့တခွားယောကျြားရဲ့အထိအတှကေို့…လိုခငျြနတောရောပါမယျထငျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ… ရုတျရုတျဖွဈပါလရေော။အဲဒါနဲ့..ကနြျောလဲခဈြခဈြလကျကိုဆှဲပွီး…အပွငျထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ။ဘျောဒါလဲ… နောကျကနကေပျလိုကျလာပွီး…
“ပွနျတော့မလို့လားကှ..အစောကွီးရှိသေးတယျလေ.. ခဏနကွေရငျငွိမျသှားမှာပါ…အဲဒီတော့ပွနျဝငျကွတာပေါ့” “မဟုတျဘူးကှ.ဟျောတယျကိုဒိုးတော့မယျ…ဒီနအေိ့မျမှာဧညျ့သညျတှရေောကျနလေို့..လှတျလှတျလပျလပျနရေအောငျ… ဟျောတယျမှာသှားအိပျမလို့. ဘိုကငျတောငျလုပျထားပွီးပွီ” “တငျးနတောတှကေပေါကျထှကျတော့မယျ… လြှော့ဖို့လိုအပျနပွေီေ..လဟုတျတယျမလား ခဈြခဈြ ” ဘျောဒါကိုပွောရငျး…မိနျးမကိုပါပွောလိုကျတယျ။မိနျးမကတော့…ကနြေျာ့ကိုဖကျထားပွီးဘာမှပွနျမပွောဘူး။ဘျောဒါက… “ငါတို့ရပျကှကျမှာမီးပကျြနတော…ပငျြးစရာကွီးမငျးတို့နဲ့ ဟျောတယျမှာပဲလိုကျအိပျတော့မယျ..စကားလေးဘာလေးပွောရတာပေါ့ ” ” အေး အဲဒါတော့.. မငျးသဘောပဲ ” ဟျောတယျရောကျတော့…ဘျောဒါက..ရီဆကျရှငျမှာအခနျးယူရငျးကနျြနခေဲ့တယျ။ကနြျောတို့လငျမယားကတော့… ဘိုကငျလုပျထားပွီးသားဆိုတော့…အခနျးထဲကိုတနျးသှားတာပေါ့။အခနျးတံခါးပိတျပွီးတာနဲ့…တံခါးဝမှာပဲမိနျးမကို…ကဈဆငျဆှဲရငျး… အင်ျကြီတှစေကတျတှကေို…ခပျကွမျးကွမျးဆှဲခြှတျလိုကျရငျး…ကနြေျာ့အဝတျအစားတှကေိုပါခြှတျလိုကျတယျ။ ဘရာနဲ့ဂြီစထရငျးလေးကိုတော့မခြှတျသေးဘူး။ကနြျောက..ဘရာနဲ့ဂြီစထရငျးဝတျထားရငျး… လိုးရတာကိုအရမျးကွိုကျတာ။မိနျမရဲ့စောကျဖုတျကိုနှိုကျလိုကျတော့…အရတှေကေထှကျနတေုံးပဲ။မိနျးမကလညျး… ကနြေျာ့လီးကိုအတငျးပဲဆှဲနတော။သူလဲ…အရမျးအလိုးခံခငျြနပွေီနဲ့တူတယျ။
ကနြျောလဲ…လကျတဈဖကျကစောကျဖုတျကိုနှိုကျ။နောကျလကျတဈဖကျက..စောကျဖုတျအရတှေနေဲ့စိုအောငျလုပျပွီး… ဖငျပေါကျထဲကိုပါအသှငျးအထုတျလုပျပေးလိုကျတယျ။စောကျကျဖုတျနဲ့ဖငျပေါကျကို..တပွိုငျနကျထဲကလိပေးနတောလေ။ဖငျကကနြျော လိုးနကေဆြိုတော့…လကျခြောငျးလောကျကတော့ရှောရှောရှူရှူပဲ။ စောကျဖုတျနဲ့ဖငျကိုနှိုကျနရေငျး… “ခဈြခဈြစောကျဖုတျကို..အခုကိုကိုနှိုကျပေးတာနဲ့ စောစောကကိုကို့ဘျောဒါနှိုကျပေးတာ..ဘယျဟာပိုကောငျးလဲ။ပွီးတော့… ကိုကိုလီးနဲ့ဟိုကောငျ့လီး…ဘယျသူ့ဟာပိုကွီးလဲဟငျ ခဈြခဈြ” ” ကိုကို ကလဲ ဘာတှမေေးနမှေနျးလဲ. မသိဘူး ” ” ခဈြခဈြစောကျဖုတျကိုဟိုကောငျနှိုကျနတော. သူ့လီးကို. ခဈြခဈြပှတျပေးနတော..ကိုကိုမွငျနတောပဲဟာ.. ပွောစမျးပါခဈြခဈြရဲ့ ” “ခဈြခဈြလဲဟိုကောငျနှိုကျပေးတာ …သူ့လီးကို ကိုငျရတာဖီးလာတယျမလား ” “ကိုကိုနှိုကျတာကတြော့…ကိုကိုကခဈြခဈြယောကျြားလေ။ ကိုကို့သူငယျခငျြးနှိုကျတာကတြော့…သူစိမျးယောကျြားတဈယောကျလေ။…ပွီးတော့…ကိုကိုရှတေ့ငျအနှိုကျခံနရေတာဆိုတော့… ပိုကောငျးတယျထငျတာပဲ။သူ့လီးကကိုကိုထကျပိုကွီးတယျထငျတယျ။ဘောငျးဘီပျေါကကိုငျရတာကို..သိသာတယျ ဟိဟိ.. ”
” အဲဒါဆို…အခုသူ့လီးနဲ့လိုးတာမခံကွညျ့ခငျြဘူးလား” လို့မေးလိုကျမိတယျ။ဘာလို့အဲလိုမေးလိုကျမိမှနျး… ကိုယျ့ကိုကိုယျတောငျမသိလိုကျဘူး။ “ကိုကိုကကွညျဖွူလို့လား… ” “ကိုကိုမိနျးမလေးကို…ခံစားမှုအသဈလေးတှနေဲ့… ရငျခုနျစခေငျြလို့ပါ။ကိုကိုမိနးမနဲ့..တခွားယောကျြားတဈယောကျလိုးနတောကိုလဲ..ကိုကိုကွညျ့ခငျြနတော။အခုခဈြခဈြကို… ကိုကိုနှိုကျနသေလို…စောကျဖုတျကိုတဈယောကျ…ဖငျကိုတဈယောကျ…တူးအငျဝမျးလိုးမယျလေ” အဲဒီလိုပွောနရေငျးနဲ့…ဘျောဒါက..ကနြေျာ့မိနျးမကိုတကျလိုးနတေဲ့မွငျကှငျးကို… ဘေးကနထေိုငျကွညျ့ခငျြတဲ့စိတျတှပျေါလာတယျ။ကနြျောမဟုတျတဲ့ယောကျြားတဈယောကျက…မိနျးမကိုလိုးနတေဲ့အခြိနျ… မိနျးမရဲ့တုံ့ပွနျမှုက..ဘယျလိုနမေလဲသိခငျြလာတယျ။ ” ကိုကိုပွောနတောနဲ့ ခဈြခဈြလေ… စောကျဖုတျထဲကရော.. ဖငျထဲကရော.. ယားလာပွီကှာ။ကွမျးကွမျးလေးနှိုကျပေးပါ။ တဈကယျတောငျ..အလိုးခံခငျြလာပွီ ဟိဟိ ”
အဲဒီအခြိနျမှာပဲ…တံခါးခေါကျသံထှကျလာတယျ။ကနြျောတို့နှဈယောကျလုံးလနျ့သှားတာပေါ့။တံခါးလာခေါကျတဲ့လူကို… တျောတျောတငျးသှားတယျ။အဲဒါနဲ့ရခြေိုးခနျးထဲက…တဘကျတှယေူပွီး..မိနျးမကရငျလြှားလိုကျသလို… ကနြျောလဲတဘကျပတျလိုကျပွီး…တံခါးကိုဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ဘျောဒါဖွဈနတေယျ။ ဘျောဒါကစပျဖွီးဖွီးနဲ့… “ငါ့မှာဆေးလိပျပါမလာလို့…မငျးမှာရှိသေးလားလို့..လာတောငျးတာ.. ဟီးဟီး ” “မငျးတျောတျောနှောငျ့ယှကျတဲ့ကောငျပဲ…ကောငျးခနျးရောကျနပွေီဟ ” ” ဟာ…ကောငျးခနျးရောကျနပွေီလား… ငါလညျး…အဲဒီကောငျးခနျးကိုကွညျ့ခငျြနတော ဟီးဟီး” ကနြျောလဲ…ဘျောဒါကမိနျးမကိုလိုးတဲ့အကွောငျးပွောနရေငျး…ဘျောဒါရောကျလာတော့စိတျထဲမှာပျေါလာတဲ့…အကွံတဈခုကို… ခကျြခငျြးအကောငျအထညျဖျောဖို့…ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။
“စောကျခှကျပွောငျမနနေဲ့..ဆေးလိပျဗူးကပိုကျဆံအိတျဘေးနားမှာ..ထားထားတယျ။ ယူမသှားနဲ့…ဆေးလိပျကနဲနပွေီ.. အခနျးထဲမှာပဲသောကျ ” လို့ပွောပွီး…ဘျောဒါအခနျးထဲဝငျဘာတာနဲ့… တံခါးကိုလော့ခလြိုကျတယျ။ခဈြခဈြက..တဘကျကိုရငျလြှားပွီးကတငျပျေါမှာထိုငျနတော။ဘျောဒါက..ခဈြခဈြရဲ့ရှနေ့ားကခုံမှာဝငျထိုငျပွီး …ဆေးလိပျသောကျတယျ။ကနြျောလဲခဈြခဈြဘေးမှာဝငျထိုငျလိုကျပွီး…ခဈြခဈြကိုဖကျလိုကျရငျး… “အနှောငျ့အယှကျကောငျက… ဆေးလိပျသောကျခငျြလို့တဲ့မိနျးမရေ…ကောငျးခနျးရောကျနပေါပွီဆိုတာတောငျ…ကွညျ့ခငျြတယျဆိုပွီး…အခှကျလာပွောငျနသေေးတယျ ” ” ခဈြခဈြကတော့…ဂရုမစိုကျပေါငျ…ပရိတျသတျရှိလို့ကတော့ ..ပိုတောငျလုပျပွလိုကျအုံးမယျ ” ခဈြခဈြကအဲလိုလဲပွောရော… ဘျောဒါကလကျခုပျထတီးတယျ။ကနြျောလဲခဈြခဈြရငျလြှားထားတဲ့…တဘကျကိုခါးထိရောကျအောငျဖွခေကြာ…
ဘရာထဲကိုလကျထဲ့လိုကျပွီး…နို့တှကေိုနှိုကျလိုကျတယျ။ခဈြခဈြက…ပိုတောငျဟော့နသေေးတယျ။တဘကျကိုလုံးဝဖယျလိုကျပွီး… ပေါငျကိုကားစောကျဖုတျကို…ပငျတီပျေါကနပှေတျရငျး..ဘျောဒါကိုကွညျ့နလေိုကျသေးတယျ။ ဘျောဒါရဲ့မကျြလုံးတှကေ… ခဈြခဈြရဲ့ပေါငျကွားမှာ။ခဈြခဈြလဲစောကျဖုတျကို…ပငျတီပျေါကနပှေတျနယေုံမဟုတျတော့ဘဲ… အထဲကိုလကျထညျ့ပွီးစောကျဖုတျထဲကိုအသှငျးအထုတျပါလုပျတာ။ ကနြျောလဲ…ဘျောဒါပိုမွငျအောငျဘောငျးဘီလေးကို… တဈဖကျကပျပေးလိုကျပွီး…ပေါငျတှကေိုလဲပိုဖွဲပေးလိုကျတယျ။ဘျောဒါက…ထိုငျခုံမှာမှီထိုငျနရောကနေ…ကိုယျကိုရှကေို့ငျးပွီး… ခဈြခဈြစောကျဖုတျကိုသခြောကွညျ့နတော။ခဈြခဈြကထိုငျနရောနထေပွီး…ဘျောဒါရှမှေ့ာဖငျကုနျးပွီး…ကနြေျာ့လီးကိုစုပျပေးတယျ။ ခဈြခဈြရဲ့လကျတှကေတော့…သူ့စောကျဖုတျကိုသူနှိုကျနတေုံးပဲ။ဘောငျးဘီလေးက..ကနြျောဘေးကပျပေးထားတဲ့အတိုငျးဆိုတော့… ဘျောဒါထိုငျနတေဲ့နရောကကွညျ့ရငျ…ခဈြခဈြရဲ့စောကျဖုတျကိုရော…နှိုကျနတေဲ့လကျတှကေိုရော…လကျခြောငျးတှစေောကျဖုတျထဲ… ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ…ဖွဈနတောတှကေိုရော..အနီးကပျမွငျနရေမှာလေ။ဘျောဒါလဲ…ခဈြခဈြစောကျဖုတျကို ယကျခငျြနလေားမသိဘူး။
နှုတျခမျးတှလြှောတှသေပျနတော။ခဈြခဈြက…သူ့လကျနောကျတဈဖကျနဲ့သူ့ဖငျထဲကိုသူ… ထပျတောငျနှိုကျနလေိုကျသေးတယျ။ကနြေျာ့လီးကိုစုပျနရောကနေ..မကျြနှာနားကပျလာပွီး “ကိုကို..ခဈြခဈြရခြေိုးခနျးထဲသှားလိုကျအုံးမယျ…ကိုကို့ဘျောဒါကိုမေးလိုကျပါအုံး… ခဈြခဈြစောကျဖုတျကိုလုပျခငျြရဲ့လားလို့….တျောကွာ..ခဈြခဈြတို့ကလုပျခိုငျးလို့လုပျရပါတယျဖွဈနအေုံးမယျ။.”ခိခိ… ကိုကို့ဘျောဒါခဈြခဈြကိုလိုးခငျြတယျဆိုလညျး…ခဈြခဈြဘာတှကွေိုကျတယျဆိုတာ . ပွောထားလိုကျအုံး။ ကိုကို့ ကိုမှ မမှီရငျ sorry ပါလို့ . ခဈခဈ ” ပွောပွီးထှကျသှားတော့…ဘျောဒါက…လမျးလြှောကျလို့ လှုပျသှားတဲ့ခဈြခဈြရဲ့ဖငျတှကေို..သှားရညျတမွားမွားနဲ့လိုကျကွညျ့နတော။ “ဟကေ့ောငျ…ဇာတျကွီးလဲ လိမျသှားအုံးမယျ. ..” “မငျးမိနျးမကလှလှနျးလို့လိုကျကွညျ့မိတာပါကှာ..စောကျဖုတျလေးနဲ့ဖငျလေးကို… အနီးကပျမွငျလိုကျရတော့..ငါ့စိတျတှတေောငျထိနျးလို့မရတော့ဘူး…။မငျးမိနျးမသာမဟုတျရငျ… ငါဆှဲပွီးကောငျးကောငျးယကျပဈလိုကျတယျ… ။
စောကျဖုတျလေးက..အရတှေကေိုစိုပွီး..နှုတျခမျးသားလေးတှကေအိနတောပဲဟီးဟီး.တဈကယျပွောရရငျ..စောကျဖုတျလေးကိုရောဖငျ ကိုရော..ပယျပယျနယျနယျယကျပွီးတော့… လိုးပလိုကျခငျြတာ….” “အေး..ဟုတျပွီလငေါ့မိနျးမကလဲမငျးလီးကိုရငျခုနျနတော။ငါလဲ… တူးအငျဝမျးစမျးခငျြနတေယျ..။ဒါပမေယျ့…ငါ့မိနျးမနဲ့ငါခိုငျးတဲ့အတိုငျးပဲမငျးလုပျရမယျ… ။မငျးသဘောနဲ့မငျး..ဘာမှမလုပျရဘူး..။ငါဒါမှမဟုတျ..ငါ့မိနျးမကစိတျမပါတော့ဘူးဆိုတာနဲ့…မငျးရပျရမယျ…။အဲဒီအခကျြတှကေို… မငျးသဘောတူတယျဆိုရငျတော့.မငျးဖွဈခငျြတာဖွဈရမှာပေါ့..။သဘောမတူဘူးဆိုရငျတော့…မငျးပွနျလို့ရပွီ…။” “သဘောတူပါတယျကှာ…မငျးတို့စိတျတိုငျးကရြပါစမေယျ..။ ဟီးဟီး.. မငျးပွောတာကိုသာမငျးမဖကျြနဲ့ .. ” “အေး.. ငါခဈြခဈြပွနျထှကျလာရငျ ပွောကွညျ့လိုကျမယျ” ကနြျောတို့ပွောနတေုံးမှာဘဲ..ခဈြခဈြကရခြေိုးခနျးထဲမှပွနျထှကျလာပွီး…ကနြျောတို့ နှဈယောကျကွားမှာလာရပျရငျး “ကိုကိုတို့..ဘာတှပွေောနကွေတာလဲ..ခဈြခဈြကိုမဟုတျတာတှေ..ကွံစညျနတောမလား … ” “မဟုတျတာတှမေဟုတျပါဘူး…ဟုတျတာတှပေါခဈြခဈြရဲ့.. ဒီကောငျက…ဒီညခဈြခဈြကိုမခဈြရရငျသရေပါတော့မယျတဲ့… ခဈြခဈြသဘောကြ…စိတျတိုငျးကရြပါစမေယျတဲ့…ခဈြခဈြသဘောကိုမေးမလို့..စောငျ့နတော…။”
“လူ့အသကျတဈခြောငျးကယျကောငျးပါတယျ….ကိုကို့ဘျောဒါက…ခဈြခဈြကိုတကျသာမလုပျရသေးတာ…။ခဈြခဈြနို့တှကေိုရော… စောကျဖုတျကိုရော..နှိုကျထားတာမှပယျပယျနယျနယျရယျ…။အသကျတဈခြောငျး…ကယျလိုကျပါမယျလေ…ဟိဟိ….ဒါပမေယျ့… ခဈြခဈြစိတျတိုငျးမကတြော့ရငျတော့…ခကျြခငျြးရပျပဈရမယျ…” “ခဈြခဈြသဘောတူတယျဆိုတော့…ခဈြခဈြကို..ကိုကိုမေးမလို့… ကိုကို့ကိုလဲ.မခနျြထားရဘူးနျော ” “မခနျြထားပါဘူး…. ကိုကိုရဲ့ ” “ဒါဆိုခဈြခဈြ…ဘယျသူ့ကိုအရငျရှေးမှာလဲ ” “ကိုကိုသူငယျခငျြးအသကျကို… အရငျကယျလိုကျပါမယျကိုကိုရယျ..။တျောကွာသသှေားမှဖွငျ့..ခဈြခဈြတို့အမှုပါတျနပေါအုံးမယျ….ကိုကို့..ကိုရှယျပွနျပွုစုပေးမှာပါနျော …။ကိုကိုတို့ပွောနတောနဲ့…ခဈြခဈြစိတျတှအေရမျးလာနပွေီကှာ…။အပွောလေးတှရေပျပွီးအလုပျလေးတှစေရအောငျ .. ” “ကဲ..ဟိုလူကွီးအတှငျးခံဘောငျးဘီပဲခနျြပွီး..ကနျြတာတှအေကုနျခြှတျ…ခဈြခဈြဆီကိုဒူးထောကျလာခဲ့.စောကျဖုတျယကျခိုငျးမလို့…” ဘျောဒါလဲ….ခဈြခဈြပွောတာနဲ့အဝတျတှခြှေတျပွီး..ခဈြခဈြနားကိုဒူးထောကျပွီးသှားတယျ။ခဈြခဈြကမတျတပျ… ဘျောဒါကဒူးထောကျရကျသားဆိုတော့…ခဈြခဈြရဲ့နို့တှနေဲ့သူ့မကျြနှာနဲ့ကတနျးနတောပေါ့။ “ခဈြခဈြရဲ့နို့တှကေိုလြှာနဲ့ယကျပေး…ပွီးရငျဗိုကျသားတှေ… ပွီးရငျပေါငျနှဈဖကျ…လကျတှကေဖငျတှကေိုညှဈပေး…..” ဘျောဒါလဲ… ခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးနို့တှကေိုလြှာနဲ့ယကျ… အဲဒီကနဗေိုကျလေးတှကေိုလြှာနဲ့ယကျရငျး….တဖွေးဖွအေောကျကိုဆငျးသှားတယျ။ဒီကောငျလြှာနဲ့ယကျခဲ့တဲ့နရောတှမှော… တံတှေးတှစေိုပွီးကနျြနခေဲ့တာ။ခဈြခဈြလကျတဈဖကျက..သူ့နို့တှကေိုသူညှဈလိုကျ… စောကျဖုတျကိုပှတျလိုကျနဲ့။နောကျလကျတဈဖကျက…ဘျောဒါရဲ့ခေါငျးကိုကိုငျပွီးတော့…သူယကျစခေငျြတဲ့နရောတှကေို… ထိနျးပွီးပွပေးနတေယျ။
ခဈြခဈြက..ဘျောဒါရဲ့ခေါငျးကိုကိုငျပွီးခှာလိုကျတယျ။ပွီးတော့…ဘျောဒါရဲ့ပခုံးပျေါခွထေောကျတဈဖကျတငျလိုကျပွီး… သူ့စောကျဖုတျနဲ့မကျြနှာနဲ့ကိုကပျပေးလိုကျတယျ။ကနြျောလဲ…ဘျောဒါခဈြခဈြစောကျဖုတျယကျနတောကိုကွညျ့ပွီး…ကနြျောတောငျ ဝငျယကျခငျြလာတယျ။ ဘျောဒါရဲ့လကျတှကေတော့…ဖငျတှကေိုညှဈနတေုံးပဲ။ခဈြခဈြကဘောငျးဘီပျေါကနပေဲ… အယကျခံနရေတာအားမရလို့ထငျယျ။ဘောငျးဘီတဈဖကျဆှဲလိုကျတယျ။… စောကျဖုတျပျေါလာအောငျဖျေါပေးလိုကျပွီး..စောကျဖုတျအယကျခံရငျးသူ့ဟာနဲ့… ဘျောဒါရဲ့မကျြနှာကိုပှတျနတော။ဘျောဒါရဲ့မကျြနှာမှာ..စောကျရတှေရေော..သူ့တံတှေးတှရေောပပှေပွီး…ရှဲနတောပဲ။ ခဈြခဈြက
“”ဘောငျးဘီခြှတျပေးတော့ကှာ…” အစိကိုစုပျရငျးအထဲကိုနှိုကျပေး….အစိအစုပျခံရငျးစောကျဖုတျအနှိုကျခံနရေငျး… ခဈြခဈြပိုဟော့လာတယျထငျတယျ။ “အား…ကောငျးလိုကျာ….ကမြရဲ့စောကျပတျကိုယကျပေးစမျးပါ…လကျတှနေဲ့လဲ… နှိုကျပေးစမျးပါ..အား..မိုကျတယျကှာ. အရမျးကောငျးတာပဲ .” လို့ထုတျပွောလာတဲ့အပွငျ…ဘရာကိုခြှတျခလြိုကျပွီး… သူ့နို့တှကေိုသူပယျပယျနယျနယျကိုညှဈလာတယျ။သူ့ဖငျပေါကျကိုပါ…သူနှိုကျလာတာတှရေ့တယျ။ “အား…ကောငျးလိုကျတာရှငျရယျ…ဖငျပါအယကျခံခငျြလာပွီ…ကုတငျပျေါမှာကုနျပေးမယျ..ဖငျဖွဲပွီးဖငျယကျပေးပါအုံး.. ” ခဈြခဈြကတငျစောငျးမှာကုနျးပေးတော့…ဘျောဒါကနောကျကနဖေငျဖွဲပွီး…စောကျဖုတျနဲ့ဖငျကိုလြှာအပွားလိုကျနဲ့ယကျပေးနတော။
“အားမိုကျတယျကှာ…စောကျပတျထဲလကျနဲ့နှိုကျပေးအုံး…ဖငျပေါကျကိုပါလြှာနဲ့ထိုးပေး…အား.ကောငျးတယျကှာ….ဖငျထဲဝငျလာပွီ… ဟုတျတယျ…အဲဒီလိုထိုးခိုငျးတာ…အမလေး…အရမျးမိုကျလိုကျတာ…အရမျးကောငျးလာပွီ…အဲဒီအတိုငျးဆကျထိုးပေး….ပွီးတော့မယျ…စောကျပတျထဲကလကျကိုလဲ သှကျသှကျလေး….” ပွောရငျးနဲ့… သူ့အစိကိုသူ့လကျနဲ့ပှတျကာဖငျကွီးယမျးခါပွီးမှောကျကသြှားတယျ။ဘျောဒါလဲ… ကွမျးပွငျပျေါမှာပကျလကျကွီးလနျသှားတယျ။ဘာဂြာအသားကုနျပေးလိုကျရတော့ပွိုငျးသှားမှာပေါ့။ကနြျောလဲ… ခဈြခဈြဘေးမှာသှားလှဲရငျး…ခဈြခဈြရဲ့နဖူးလေးကို…အသာအယာနမျးလိုကျပွီး…ဆံပငျလေးတှကေိုပှတျပေးနလေိုကျတယျ။ခဈြခဈြ… အမောပွပွေီထငျတဲ့ အခြိနျမှ.. “မောသှားလား ကိုကို့မိနျးမလေး ” “အငျး နဲနဲတော့မောတယျ ” “ကောငျးရောကောငျးရဲ့လား” “ကောငျးတယျ…ကိုကို့ဘျောဒါက…ဖငျထဲကိုလြှာနဲ့ထိုးပေးတာ…စောကျရမျးမိုကျတယျ…။ကိုကိုရောကွညျ့လို့ကောငျးလား” “ကောငျးတာပေါ့မိနျးမရဲ့…မိနျးမပွီးသှားတာမလား” “အငျး.ပွီးသှားတယျ..ဒါပမေယျ့စောကျဖုတျထဲမှာယားနတေုံးပဲ… အလိုးခံခငျြနသေေးတယျ…။ကိုကိုသူငယျခငျြးလီးကွီးက…ဘောငျးဘီထဲမှာဖုထှကျနတောကွညျ့ပွီး… အသဲတှယေားပွီးစောကျဖုတျထဲကပါလှိုကျလှိုကျပွီး ယားလာတာ ဟိဟိ” ” ဒါဆိုသူ့လီးနဲ့ အရငျခံမှာပေါ့ ဟုတျလား ” “ဟုတျ…ပွီးမှ…ကိုကို့အတှကျရှယျအစီအစဉျရှိပါတယျ.ကိုကိုရဲ့..ကိုကိုပဲခဈြခဈြကို…ကိုကို့သူငယျခငျြးလိုးတာကွညျ့ခငျြတယျဆို” “အေးပါ..အေးပါ…ဟုတျပါပွီ…” “ကိုကို့သူငယျခငျြးကိုမေးကွညျ့ပါအုံး…အမောပွပွေီလားလို့…ခဈြခဈြက ရယျဒီပါလို့ ” “ကဲ…ဟကေ့ောငျငါ့မိနျးမကမငျးကိုချေါနပွေီ..ဘယျလိုလဲလကျနကျခသြှားပွီလား…ဒါဆိုရငျတော့..ပှဲကွညျ့ပရိတျ သတျပဲလုပျတော့တဲ့ ” “လကျနကျဘယျခမြလဲကှာ…သရေငျသပေစဟေိဟိ”လို့ပွောရငျး…ကနြျောနဲ့ခဈြခဈြလှဲနတေဲ့ဘေးနားရောကျလာတယျ။ “ခဈြခဈြကဒါရိုကျတာလုပျမယျ…ကိုကိုတို့ကခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးလိုကျလုပျကွ…..ကဲအခုခဈြခဈြနို့ကို…နှဈယောကျတူတူစို့ပေး… ။
ကိုတို့စို့ပေးနရေငျး.ခဈြခဈြက…လီးနှဈခြောငျးလုံးကို ကိုငျထားခငျြလို့…” ကနြျောနဲ့ဘျောဒါလဲ… ခဈြခဈြရဲ့နို့နှဈဖကျကိုပွိုငျတူစို့လိုကျကွတယျ။အဲ့ဒီခြိနျမှာ…ခဈြခဈြကလီးနှဈခြောငျးလုံးကိုကိုငျပွီးဂှငျးထုပေးနတော။ “အား..နို့နှဈဖကျလုံးအစို့ခံရတာမိုကျတယျကှာ…ကိုကိုကခဈြခဈြဖငျပေါကျထဲကိုနှိုကျပေးကှာ…ရှငျကစောကျပတျထဲကိုနှိုကျပေး… အားပါးပါး…တကယျမိုကျတယျကှာ…စောကျပတျရော..ဖငျရောနို့တှရေော..တကယျထိတယျကှာ” ကနြျောတို့လဲ… ခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးနို့စို့နရေငျး..စောကျဖုတျထဲရောဖငျထဲရောနှိုကျပေးလိုကျတယျ။စောကျဖုတျထဲကအရတှေကေစီးကနြတောဆိုတော့ …ဖငျပေါကျကိုဆီဆှတျစရာတောငျမလိုဘူးဖွဈနတေယျ။ “ကဲကှာ..ဒီတဈခါစောကျပတျကိုရောဖငျကိုရော…အတူတူ ယကျပေးကွကှာ…ကိုကိုကပကျလကျလှနျလိုကျဆိုပွီး…”
ကနြေျာ့ပျေါကိုပွောငျးပွနျတကျခှလာတယျ။ကနြျောလဲမကျြနှာရှရေ့ောကျလာတဲ့..ခဈြခဈြစောကျစိလေးကို..သကွားလုံးစုပျသလိုအရငျစုပျ လိုကျပွီး…ယကျပေးနလေိုကျတယျ။ဘျောဒါကလဲဖငျဖွဲပွီး…ဖငျပေါကျလေးကိုပယျပယျနယျနယျယကျပေးနတောကိုလဲတှနေ့ရေတယျ။ ဒီတဈခါ… စောကျပတျနဲ့ဖငျတပွိုငျနကျ..အယကျခံနရေတဲ့ခဈြခဈြဆီက..ဘာသံမှထှကျမလာတော့ဘူး။ကနြေျာ့လီးကိုစုပျနလေို့လေ။ကနြျောလဲ… အရမျးကောငျးလာတာနဲ့ခဈြခဈြရဲ့ခေါငျးကိုထိနျးကာကော့ကော့ပွီး… ပါးစပျကိုလိုးလိုကျတော့..ခဈြခဈြလဲကနြျောပွီးခငျြလာတာသိလို့ထငျတယျ။အားပွငျးပွငျးနဲ့စုပျပေးတဲ့အပွငျ… သူ့ပါးစပျထဲဝငျလာတဲ့လီးကို…လြှာနဲ့ပါထိနျးပွီးယကျပေးလာတယျ။ လကျတဈဖကျက…ဥတှကေိုလာပှတျပေးတော့… ကနြျောလဲမထိနျးနိုငျတော့ပဲ..သူ့ပါးစပျထဲကိုအရတှေပေနျးထုတျလိုကျတာပေါ့။ကနြျောပွီးသှားပွီး… အရတှေကေုနျသှားတဲ့ထိစုပျပေးရငျး…အရတှေကေမြိုခပြေးတာ။ခဈြခဈြက..ကနြျောနဲ့ဘျောဒါကွားကိုလှိမျ့ဆငျးလာပွီး… ကနြေျာ့ကိုလာဖကျထားတယျ။သူ့ဖငျတှကေတော့ဟိုကောငျ့ဖကျကိုပဈထားတုနျး။ဘျောဒါကလဲဖငျဖွဲပွီးယကျနတေုနျးပဲ။
“ကောငျးလား ကို ” “ကောငျးတာပေါ့ကှယျ…ကိုကို့မိနျးမလေးကအရမျးခဈြဖို့ကောငျးတာပဲ..” “ကိုကို့အရတှေမြေိုခပြွီးတော့… စောကျဖုတျထဲကလေ..အရမျးယားလာတာသိလား..။စောကျဖုတျကိုလီးနဲ့အလိုးခံခငျြနပွေီကှာ…ကိုကို့ဘျောဒါကို… လိုးခိုငျးလိုကျရတော့မလား…။ကိုကိုက…အားမှေးရငျးနဲ့ကွညျ့နပေေါ့..။ကိုကို့ဟာပွနျတောငျလာမှ…ကိုကို့အတှကျ… ရှယျအစီအစဉျစကွတာပေါ့” “အေးပါကှယျ ဟုတျပါပွီ ခဈြခဈြ သဘော ” “ဟိုလူကွီးလုပျတော့ကှာ…ခဈြခဈြလိုခငျြနပွေီ… ခဈြခဈြကိုငျပွီးထညျ့ပေးမယျ…ရှငျ့ဟာကွီးကအကွီးကွီး…ခဈြခဈြဟာလေးကှဲသှားမှာစိုးလို့…” ခဈြခဈြက…ဒူးထောငျပေါငျကားပေးလိုကျတော့…ဟိုကောငျကကှနျဒုံးစှပျလိုကျပွီး… ခဈြခဈြစောကျဖုတျကိုသူ့လီးကွီးတပေ့ေးတယျ။တထေ့ားတဲ့လီးကိုခဈြခဈြကကိုငျပွီးတော့..မထညျ့သေးပဲနဲ့… စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးအတိုငျးပှတျနသေေးတာ။လီးထိပျနဲ့လဲ…စောကျစိကိုထိုးနသေေးတာတှရေ့တယျ။
ပွီးတော့မှစောကျဖုတျထဲကိုထိုးထညျ့တော့… ဘျောဒါကအပျေါကနေ..အလိုကျသငျ့ဖိထညျ့ပေးတာ။လီးကွီးတဈခါတညျးအဆုံးထိဝငျသှားမှာစိုးလို့ထငျတယျ။လီးကိုကိုငျထားတဲ့လကျ ကိုတော့မလှတျသေးဘူး။ “အား….ဝငျလာပွီ..ပွညျ့သိပျနတောပဲကှာ…အဆုံးထိမထညျ့နဲ့အုံး…ဒီတိုငျးလေးပဲလုပျပေးအုံး… ကပျြသိပျနတောပဲကှာ..” ဟုတျတယျဗြာလီးကွီးကကွီးနတေော့…စောကျပတျအဝလေးဆိုတာ… ဝလုံးလေးလိုဝိုငျးနတော။ခဈြခဈြလကျတဈဖကျက…သူ့အစိလေးကိုသူပှတျနသေေးတယျ။ “အားပါးပါး…မိုကျတယျကှာ…ဖွေးဖွေးနဲ့အဆုံးထိဝငျအောငျသှငျးတော့ ကှာ ” ဘျောဒါလဲခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျး..သှငျးလိုကျထုတျလိုကျနဲ့လီးကွီးတဈခြောငျးလုံးစောကျဖုတျထဲအဆုံးထိဝငျသှားတယျ။လီးကိုအဆုံးထိ ထုတျ…အဆုံးထိပွနျသှငျးနဲ့လိုးပေးနတေဲ့…ဘျောဒါရဲ့ခါးကို..ခဈြခဈြကခွထေောကျတှနေဲ့ခှလိုကျရငျး… လီးသှငျးတဲ့အခြိနျမှာ..ဖငျတှကေိုကော့တငျပေးလိုကျလုပျပေးနတော။ “အားကိုကိုရာ…တကယျထိတယျကှာ… စောကျဖုတျထဲကိုအဆုံးထိဝငျတယျကှာ..သားအိမျကိုတောငျလာလာထိတယျသိလား… မိုကျတယျကှာ..အား..အား..တကယျမိုကျတယျကှာ…အားမရတော့ဘူး…ကမြခွထေောကျတှကေိုဆှဲပေးထားမယျ…နို့တှကေိုဆှဲပွီး… ဆောငျ့လိုးပေးစမျးပါ…” “အား…အမလေး..ဟုတျတယျ…အဲလိုဆောငျ့ခိုငျးတာ..ကောငျးလိုကျတာ…ဆောငျ့ဆောငျ့…” ခဈြခဈြကခွထေောကျတှကေို…ပခုံးထိအောငျဆှဲတငျလိုကျတော့…ခဈြခဈြရဲ့ဖငျကမှယေ့ာနဲ့လှတျပွီး… ဖငျတှပေိုကော့လာတယျ။စောကျဖုတျလဲပိုကော့လာတယျ။ဘျောဒါလဲ..မှယေ့ာပျေါလကျတဈဖကျထဲနဲ့ပဲထောကျထားပွီး…
နောကျလကျတဈဖကျကနို့တှကေိုညှဈရငျး…ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနတောဆီးခုံခငျြးရိုကျမိလို့ထှကျလာတဲ့..’ဖတျဖတျ’ဆိုတဲ့အသံတှေ… အရတှေရှေဲနတေဲ့စောကျဖုတျထဲ..လီးဝငျထှကျနတေဲ့အခြိနျထှကျတတျတဲ့ ‘ပဈြ ပဈြ ပလှတျ ပလပျ ‘ဆိုတဲ့အသံတှရေော… ခဈြခဈြရဲ့’အား…အား…ကောငျးလိုကျတာ…အရမျးကောငျးတာပဲ…အား…ဆောငျ့လိုးပေးစမျးပါ…စောကျပတျထဲမှာပွညျ့ကပျြပွီး… အီစိမျ့နတောပဲ…လိုးလိုးဆောငျ့လိုးလိုကျစမျးပါလို့အျောနတေဲ့အသံတှနေဲ့ပှတျပှတျကို ညံနတော။ ကနြျောလဲ… ခဈြခဈြဘေးနားတိုးသှားပွီး…နှုတျခမျးလတှေကေိုနမျးရငျး…နို့သီးလေးတှကေိုညှဈနပေေးလိုကျတယျ။ပွီးတော့… သူ့မကျြနှာပျေါကနျ့လနျ့မှောကျလိုကျပွီး…နှုတျခမျးနှဈလှာထဲကိုလီးထိုးထညျ့ပွီး…ပါးစပျကိုလိုးနလေိုကျတယျ။ ခဏနတေော့ခဈြခဈြက..လီးကိုပါးစပျကနဆှေဲထုတျလိုကျရငျး … “ဟိုလူကွီး…ရှငျပကျလကျအိပျလိုကျ… ကမြအပျေါကနတေကျဆောငျ့မယျ…ကိုကိုကမတျတပျရပျလိုကျ..ဆကျစုပျပေးမယျနျော”
ကနြျောတို့လဲ…ခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးနရောတှပွေငျလိုကျကွပွီး… ခဈြခဈြကဘျောဒါရဲ့ကိုယျပျေါမှာတကျခှလိုကျတယျ။ဘျောဒါရဲ့လကျနှဈဖကျကိုဆှဲပွီး… သူ့နို့တှပေျေါတငျပေးလိုကျတာနဲ့..ဘျောဒါကလဲနို့တှကေိုညှဈတော့တာပဲ။ ခဈြခဈြကတကျသာခှထားတာ… လီးကိုမသှငျးသေးပဲ..ကိုငျထားပွီး..စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးအတိုငျးပှတျနသေေးတယျ။ကနြျောလဲဘေးနားထိုငျပွီး… ခဈြခဈြဖငျတှကေိုညှဈနလေိုကျတယျ။ဖငျပေါကျလေးကိုလညျး..ပှတျပှတျပေးလိုကျသေးတယျ။ ခဈြခဈြက..စောကျဖုတျထဲကိုလီးသှငျးပွီး…အပျေါအောကျဖွေးဖွေးခငျြးစဆောငျ့တယျ။စောစောကလီးကိုကိုငျထားတဲ့လကျက… သူ့အစိကိုသူပှတျနသေေးတာ။ကနြျောလဲ…သူ့ဖငျပေါကျထဲကို…လကျတဈခြောငျးသှငျးပွီး…အသှငျးအထုတျလုပျပေးနလေိုကျတယျ။ ခဈြခဈြကဆောငျ့တာတှမွေနျလာတယျ။တဈခကျြတဈခကျြဆီးခုံခငျြးကပျပှတျနတော။ခဈြခဈြနို့တှကေိုကိုငျနတေဲ့..ဘျောဒါရဲ့လကျတှကေ လညျး…ခါးကိုကိုငျပွီးဆှဲဆောငျ့ခနြသေလို..အောကျကနလေဲကော့ကော့ပွီးလိုးနတော။
ခဈြခဈြရဲ့လကျတှကေ…တဈဖကျကသူ့နို့တှကေိုညှဈနပွေီး…တဈဖကျကသူ့အစိကိုသူပှတျနတောနဲ့… ကနြျောလဲနို့တဈဖကျကို..ညှဈပေးနလေိုကျတယျ။နောကျတဈဖကျက..ဖငျပေါကျကိုနှိုကျလိုကျ.ဖငျတှကေိုညှဈလိုကျလုပျရငျး….ခဈြခဈြ ဆောငျ့တဲ့အခြိနျတှမှော..ကူတှနျးပေးနလေိုကျတယျ။ “အား ကောငျးလိုကျတာကှာ ခဈြခဈြပွီးခငျြလာပွီ” ပွောလညျးပွော… သူ့စောကျဖုတျထဲကိုဘျောဒါရဲ့လီးကွီး အဆုံးသှငျးပွီး…ဆီးခုံခွငျးကပျပှတျနတေယျ။ဖငျထဲကိုထညျ့ထားတဲ့လကျခြောငျးကိုလညျး… စအိုဝကညှဈနတောကိုခံစားလာရတယျ။အဲဒီအခြိနျမှာပဲ…အောကျကဘျောဒါကလညျး…အောကျကနကေော့တငျရငျး… “ပွီးပွီ… ပွီးသှားပွီ”လို့ပွောရငျးခဈြခဈြရဲ့ခါးကိုဖကျထားတဲ့လကျတှပွေကေသြှားတယျ။ ခဈြခဈြက”နအေုံးလေ…ခဈြခဈြမပွီးသေးဘူး… တောငျ့ထားအုံးလေ”..ပွောရငျး…ပွနျဆောငျ့မလို့လုပျတဲ့အခြိနျမှာ…ဘျောဒါရဲ့လီးကပြော့ခှပွေီး…စောကျဖုတျထဲကနကြှေတျသှားတယျ။
ခဈြခဈြကသူပွီးတော့မယျ့အခြိနျမှာ…သူ့အရငျပွီးသှားတဲ့ဘျောဒါကို…မကမြေနပျတှနေဲ့ပွောရငျး… ရငျဘတျကိုလဲလကျသီးနဲ့ထုနသေေးတယျ။အဲဒီခြိနျထိ…ဘျောဒါကအောကျက…ခဈြခဈြကဘျောဒါရဲ့ကိုယျပျေါမှာ… လေးဘကျထောကျရကျသား။ ခဈြခဈြရဲ့စောကျဖုတျလေးက…ဘျောဒါရဲ့လီးကွီးခုမှကြှတျသှားတာဆိုတော့…ပွဲပွီးအာနတော..အထဲကအတှငျးသားတှတေောငျမွငျနရေတာ။ကနြျောလဲ….ဘာမှဝငျမပွောဘဲလှတျထားလိုကျတယျ။ထုလို့ရိုကျလို့အား ရသှားတော့မှ..ခဈြခဈြကဘေးကိုလှိမျ့ဆငျးလာတယျ။ကနြျောလဲခဈြခဈြဘေးမှာ…ဝငျလှဲလိုကျပွီးခဈြခဈြကို ဖကျထားလိုကျရငျး… “ခဈြခဈြ ပွီးသှားအောငျ ကိုကို ဆကျလုပျပေးရမလား” လို့မေးလိုကျတယျ။
“နအေုံးကှာ…ကိုကို့အတှကျသီးသနျ့အစီအစဉျရှိတယျလေ…ဟိုလူကွီးကိုခဈြခဈြတငျးနတော…သူ့ကိုအပွဈပေးရမယျ..” ကနြျောနဲ့ခဈြခဈြစကားပွောနတေုံး…ဘျောဒါလဲရခြေိုးခနျးထဲကိုဝငျသှားရာကနပွေနျရောကျလာတယျ။ “ဘာတှမြေား… အပွဈပေးမလို့လဲခဈြခဈြရဲ့..ကနြျောဘာတှမြေားအမှားလုပျမိလို့လဲ ” “ရှငျ့ကိုယျရှငျမသိဘူးလား… သူမြားကပွီးတော့ပါမယျဆိုတာကိုမစောငျ့ဘူးလေ…တဈကိုယျကောငျးသမားကွီး” “ဆောရီးပါခဈြခဈြရယျ… ခဈြခဈြရဲ့အထိအတှကေ့အရမျးကောငျးတော့ ကနြျောလဲ..မထိနျးနိုငျပဲဖွဈသှားတယျ” “အဲလိုပွောယုံနဲ့ကနြေပျရမှာလား… ” “ခဈြခဈြပေးသမြှအပွဈကိုခံပါ့မယျ ..ကနြေပျပွီလား.. ဘယျလိုအပွဈပေးမှာလဲ…ပွောပါအုံး ” “ကဲလာ..ခဈြခဈြဖငျကိုယကျပေး…ဘယျမှမကိုငျရဘူး” ခဈြခဈြကဘျောဒါကိုပွောရငျး..ကနြေျာ့ကိုဆှဲပွီးနှုတျခမျးခငျြးနမျးနလေိုကျတယျ။ဘျောဒါကတော့ခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျး..ဒူးထောငျပေါငျ ကားပေးပွီး..ပကျလကျအိပျနတေဲ့ခဈြခဈြအောကျကနေ..ဖငျဝလေးကိုယကျပေးနတော။ တခွားယောကျြားတဈယောကျက… ဖငျကိုယကျပေးနတောခံရငျး..ကနြေျာ့ကိုနမျးနရေလို့ထငျတယျ။ခဈြခဈြရဲ့အနမျးတှကေ…ပွငျးရှလှနျးနတေယျ။လကျတဈဖကျက… ကနြေျာ့ဒုတျကိုလာကိုငျပွီး..လကျတဈဖကျကသူ့ပိပိကိုပှတျလိုကျ..အစိလေးကိုပှတျလိုကျလုပျနတော။ခဏနတေော့ခဈြခဈြကခှာလိုကျပွီး …“ဟိုလူကွီး…အဲဒီမှာပကျလကျလှနျလိုကျ” ဆိုပွီး…ဘျောဒါကိုလှမျးပွောတယျ။ဘျောဒါလဲပကျလကျလှနျလိုကျတော့…ခဈြခဈြဘျောဒါရဲ့ အပျေါကနေ..ပွောငျးပွနျတကျခှလိုကျရငျး. .. “ရှငျက… အောကျကနပေိပိကိုယကျပေး။ကိုကိုက..ခဈြခဈြကိုဖငျခပြေးကှာ။ဖငျခံနရေငျးနဲ့စောကျဖုတျအယကျခံခငျြလို့”
” ခဈြခဈြကလဲ..ဘျောဒါကအောကျမှာလမေကောငျးပါဘူး” “ကောငျးပါတယျကိုကိုရ…သူ့ကိုအပွဈပေးတာလေ… ခဈြခဈြစောကျဖုတျထဲကထှကျလာတဲ့…အရတှေနေဲ့သူ့ကိုပှတျပဈမှာ..ဟိုလူကွီး..ရှငျလကျမခံ ခငျြရငျ ရတယျနျော” “ခဈြခဈြက…ရှငျနဲ့နောကျပေါကျကိုမွညျးဖို့..စဉျးစားထားတာ လကျမခံဘူးဆိုရငျပွနျလိုကျတော့..ဘယျလိုလဲ” ” ခဈြခဈြ..ဘာခိုငျးခိုငျးလုပျပါ့မယျလို့ပွောပွီးသားပဲလေ.. ဒါမြိုးဆိုလို့ကတော့လာထားပဲ ” “အဲဒါဆိုယကျတော့လေ… ကိုကိုဖငျခလြို့ရအောငျ..ဖငျကိုဖွဲပေးထားအုံး” ဘျောဒါက… ခဈြခဈြစောကျဖုတျကို..ပငျ့ယကျလိုကျရငျးဖငျကိုဖွဲပေးလာတယျ။ကနြျောလဲခဈြခဈြခါးကိုကိုငျ… ဖငျဝမှာလီးတလေို့ကျပွီးဖွေးဖွေးခငျြးသှငျးလိုကျတယျ။ခဈြခဈြရဲ့ဖငျမှာ..စောစောကဘျောဒါယကျထားတဲ့တံတှေးနဲ့… စောကျဖုတျကစီးကထြားတဲ့အရတှေနေဲ့ဆိုတော့….ဂယျြသုတျစရာတောငျမလိုပဲခြောခြောရှူရှူပဲဝငျသှားတယျ။
ခဈြခဈြခါးလေးကိုကိုငျပွီး…ဖငျကိုဖွေးဖွေးပဲလိုးနလေိုကျတယျ။ခဈြခဈြက “ကောငျးလိုကျတာကှာ….အရငျကကိုကိုဖငျလုပျရငျရှကေ့အရမျးယားတာ…ခုတော့အောကျကနယေကျပေးနတေော့…မိုကျတယျကှာ ” “ဟိုလူကွီး…မွနျမွနျယကျပေးကှာ…ပွီးတော့မယျ” “ကိုကိုလဲမွနျမွနျလုပျပေးကှာ… ပွီးခငျြလာပွီ ”’ ခဈြခဈြကပွောလာတာနဲ့…ကနြျောကိုယျပျေါကနခှေပွီး..ဖငျကိုသှကျသှကျလေးလိုးပေးလိုကျတယျ။ “အားအား..ပွီးပွီကောငျးလိုကျတာအား..အရတှေထှေကျကုနျပွီ…” ခဈြခဈြရဲ့ကိုယျလုံးလေး..တဆတျဆတျတုနျလာပွီးတော့… ဘျောဒါရဲ့မကျြနှာပျေါကို..သူ့စောကျဖုတျနဲ့ဖိပှတျနတော။ဖငျထဲထညျ့ထားတဲ့လီးတောငျကြှတျသှားတယျ။ကနြျောလဲခဈြခဈြကို… အသာလှဲခိုငျးလိုကျပွီး..ဖကျထားလိုကျရငျးသူ့ကြောလေးကို…ဖှဖှလေးပှတျပေးနလေိုကျတယျ။သူ့နဖူးလေးကိုလဲနမျးနလေိုကျရငျး … “ကောငျးလားဟငျ ခဈြခဈြ ” “အငျးတျောတျောကောငျးတယျ” “နားခငျြပွီလား” ” ခဏတော့နားမယျလေ ” “ခဈြခဈြကိုမေးခငျြတာလေးရှိလို့” ” မေးလေ..ကိုကို” “စောစောက..ခဈြခဈြကိုကိုသူငယျခငျြးကို..ပွောနတောလေ
သူနဲ့နောကျပေါကျကိုမွညျးမလို့ဆိုတာလေ..အဲဒါတဈကယျပွောနတောလား ” “အငျးပေါ့ ကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုက မကနြေပျဖူးလား” “မဟုတျပါဘူး..ခဈြခဈြရဲ့ဟိုကောငျ့ဟာက..ကို့ဟာထကျကွီးတော့…ခဈြခဈြနာမှာစိုးလို့ပါ ” “အဲဒါကွောငျ့….မွညျးကွညျ့ခငျြတာလေ..အရသာတော့ ရှိမှာသခြောတယျ..ခိခိ ” “အျော… တျောတျောအရသာရှိခငျြနတေယျပေါ့ဟုတျလား…အဲဒါဆိုပိုပွီးအရသာရှိသှားအောငျ..ရှရေ့ောနောကျရောတပွိုငျတဲလုပျခငျြတယျ… ဘယျလိုလဲ ” “ကောငျးတာပေါ့…ခဈြခဈြလဲအဲလိုစမျးကွညျ့ခငျြနတော… ပွောရမှာရှကျလို့..ခိခိ…အရငျကကိုကိုနောကျကိုလုပျရငျး.. ရှကေို့အတုနဲ့လုပျပေးတာတောငျ..ဒီလောကျကောငျးတာ ” “ခုဟာက..အစဈဆိုတော့..ဟိဟိ..ပွောရငျးနဲ့ရငျခုနျလာပွီ… ရှရေ့ောနောကျရောရှစိရှစိဖွဈလာပွီ…ခိခိ…” “ကဲ… ဘယျလိုအဲဒါဆိုစမှာလဲ…ကိုကိုတို့ကခဈြခဈြခိုငျးတဲ့ အတိုငျးလုပျမှာ” “အဲဒါဆို ဒီလိုလုပျမယျလေ…ဟိုလူကွီးနဲ့နောကျပေါကျ အရငျစမျးကွညျ့လိုကျမယျ…ပွီးတော့မှကိုကိုပွောတဲ့အတိုငျးပေါ့… ဟိုလူကွီးနောကျပေါကျကိုသှငျးနတေုနျး..ကိုကိုကပိပိလေးကိုပှတျပေးနနေျော….” “အငျးပါ…ခဈြခဈြရဲ့ပိပိလေးကိုလဲပှတျပေးမယျ…ခြိုခြိုလေးကိုလဲပှတျပေးမယျ…ကိုကိုမိနျးမလေးကောငျးအောငျ…ကိုကိုအကုနျလုပျပေးမှာ ” “ခဈြခဈြ ရသှေားဆေးလိုကျအုံးမယျ”
ရခြေိုးခနျးထဲကထှကျလာတဲ့ခဈြခဈြက…ကုတငျပျေါလေးဖကျထောကျတကျလာရငျး… “ဟိုလူကွီး… ခဈြခဈြကိုနောကျပေါကျတှယျခငျြနတောမလား..ခဈြခဈြရဲ့ဖငျကိုလာယကျပေးအုံး…ရှငျ့ဟာက…ကိုကို့ဟာထကျကွီးတော့… ခံနိုငျအောငျသသေခြောခြာလုပျထားမှဖွဈမှာ..လြှာနဲ့ပါထိုးပေးနျော ” ဆိုပွီးကုနျးပေးလိုကျတယျ။
ဘျောဒါလဲခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးပဲ…အစိလေးကိုလကျနဲ့ပှတျပွီး… စောကျဖုတျနဲ့ဖငျကိုသခြောယကျပေးနတေဲ့အပွငျ..ဖငျထဲကိုပါလြှာနဲ့ထိုးထညျ့နတောတှနေ့ရေတယျ။ပွီးတော့… စောကျဖုတျထဲကထှကျလာတဲ့အရတှေကေို…လကျနဲ့ယူပွီးဖငျဝမှာပှတျပေးလိုကျ…လကျနဲ့ထိုးပေးလိုကျလုပျနတော။ “အား…လုပျတော့ကှာ..ခဈြခဈြလိုခငျြနပွေီဖွေးဖွေးပဲသှငျးနျော…ရှငျ့ဟာကွီးကအကွီးကွီးပဲ…ဖငျကှဲသှားအုံးမယျ” “အငျးပါ….ခဈြခဈြရဲ့ဖွေးဖွေးပဲလုပျမှာပါ…နာရငျပွောနျော..” ခဈြခဈြကဖငျဘူးတောငျးထောငျနအေောငျ..ကုနျးပေးလိုကျပွီးလကျနှဈဖကျနဲ့ဖငျကိုဖွဲပေးထားတယျ။ဘျောဒါက..ခဈြခဈြနောကျမှာ..ဒူး ထောကျလိုကျရငျးခဈြခဈြဖငျဝမှာ..သူ့လီးကိုတလေို့ကျပွီးသှငျးလိုကျတာ..ထိပျဖူးကွီးကအဝမှာတငျးပွီးတော့မှ… ဖငျထဲကိုဝငျသှားတာတှနေ့ရေတယျ။ ထိပျဖူးကွီးဝငျသှားရော…ခဈြခဈြဖငျဖွဲပေးထားတဲ့သူ့လကျကို… စောကျဖုတျဆီပွောငျးပွီးသူ့ဟာသူပှတျနတော။ဘျောဒါ လဲဖွေးဖွေးသှငျးလိုကျထုတျလိုကျနဲ့…သူ့လီးတဈခြောငျးလုံးခဈြခဈြဖငျထဲ…ဝငျသှားရောကပျပွီးပှတျပေးနတေယျ။
ခဈြခဈြဆီကတော့ “ကွပျကွပျကွီးကှာ…ဖငျထဲကိုပွညျ့နတောပဲ…တဈဆို့နတောပဲ…ရငျဘတျထဲထိတောငျ… ရောကျတယျ။အား..ကြှတျကြှတျနဲ့” အသံတှကေိုစုံနတော။ ”ကောငျးလိုကျတာဘယျလိုကွီးမှနျးမသိဘူး” ဆိုတာကလဲပါသေးတယျ။ဘျောဒါလဲခဈြခဈြခံနိုငျလာပွီထငျမှ…ဆှဲထုတျလိုကျသှငျးလိုကျနဲ့ဖွေးဖွေးလုပျနတေယျ။ခဈြခဈြက “ကောငျးလိုကျတာ…ကမြအပျေါကနခေငျြသေးတယျ။ ရှငျဒီအတိုငျးပကျလကျလှနျလိုကျပွောပွီး..” နရောပွောငျးလိုကျတော့..ခဈြခဈြကဘျောဒါရဲ့အပျေါမှာကြောပေးရကျသားပေါ့။ ဘျောဒါရဲ့ရငျဘတျပျေါလကျနှဈဖကျကို..ပွောငျးပွနျလကျထောကျလိုကျရငျး..သူ့ဟာသူစိတျကွိုကျလှုပျရှားနတေယျ။ကနြျောလဲ..သူတို့ အောကျကနသှေားကွညျ့တော့..ဘျောဒါရဲ့လီးကွီးက..ခဈြခဈြဖငျထဲဝငျနတေောရော..ခဈြခဈြရဲ့ညီမလေးကအရညျတှရှေဲပွီး… အောကျကိုစီးကနြတောရော..သခြောမွငျနရေတာ။ ကနြျောလဲ…ခဈြခဈြနားကိုတိုးသှားပွီးနှုတျခမျးလေးကို.. နမျးလိုကျရငျးစောကျဖုတျလေးကိုပှတျပေးနလေိုကျတော့… “ကောငျးလိုကျတာကိုကိုရယျ..အစိလေးကိုပါပှတျပေးပွီး အထဲကိုပါ နှိုကျပေးအုံး ” ခဈြခဈြခိုငျးတဲ့အတိုငျးလုပျပေးလိုကျတာပေါ့။ခဈြခဈြဘယျလောကျတောငျ..ကောငျးနလေဲဆိုတာ..နှိုကျနတေဲ့လကျကိုပါ စောကျဖုတျကညှဈပေးနတော။ခဈြခဈြက “ကိုကို လုပျတော့ကှာ ရှကေ့ အရမျးယားနပွေီ ‘” ‘ပွောတာနဲ့ ခှထေဲကအတိုငျး..သူ့ပေါငျကွားထဲဝငျပွီးစောကျဖုတျထဲကိုသှငျးလိုကျတယျ။စောကျဖုတျကဝငျလာတဲ့လီးကို..ညှဈပေးနတောမြားကောငျး လိုကျတာ။အောကျကဘျောဒါကလဲကော့ပေးနတေော့…သူ့လီးဝငျထှကျနတောကိုပါစောကျဖုတျ ထဲကနသေိနရေတယျ။
ခဈြခဈြကတော့..ကောငျးလှနျးလို့ဆိုပွီး….ဘာတှပွေောနမှေနျးကိုမသိတော့အောငျရရှေတျနတော။ခဏနတေော့..ခဈြခဈြကနရောပွောငျးပွီး..ဘျောဒါရဲ့လီးကိုစောကျဖုတျထဲထညျ့..ကနြျောကဖငျကိုလိုးပေါ့။ကနြျောကအောကျရောကျလိုကျ…ဘျောဒါကအောကျရောကျလိုကျနဲ့…နှဈယောကျညှပျပွီးလိုးနတော တျောတျောကွာတယျ။ ခဈြခဈြလဲ… ဘယျနှခါမှနျးမသိအောငျပွီးတာတဲ့။နောကျဆုံးပှဲသိမျးကိုကနြျောတို့နှဈယောကျ..တပွိုငျနကျဆောငျ့လိုးလိုကျပွီးသိမျးလိုကျကွတာ။ကြ နျောကဖငျကိုခနြရေငျး…ဆိုတော့ခဈြခဈြဖငျထဲမှာ..အရတှေပေနျးထုတျလိုကျတာပေါ့။အကုနျမောလို့အိပျတော့မယျ့အခြိနျက… စနနေမေ့နကျတောငျရောကျခါနီးနပွေီ….. ပွီးပါပွီ….။
အဲဒီနေ့ကသောကြာနေ့လေ။နောက်နေ့အလုပ်ကလဲပိတ်တော့…လင်မယားနှစ်ယောက်..ညဘက်ကလပ်ကိုချီတက်တာပေါ့။အိမ်မှာကလဲ…ဧည့်သည်တွေရောက်နေတော့… ညကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်….ဟော်တယ်မှာပဲညအိပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးသား။ကလပ်အပြန်ညကျရင်…ဟော်တယ်မှာ ပွဲကြမ်းမယ်ပေါ့ဗျာ။ ကလပ်မှာဘော်ဒါတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကလူပျိုပဲ။ဒါပေမယ့်….မိန်းမဝါသနာအရမ်းကြီးတဲ့ကောင်။ဒီကောင့်ပုံစံက..ကစားသမားပုံစံ။တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲဗျ။
ဒီကောင်က…ကျနော့်မိန်းမကိုတွေ့တိုင်း..ဖင်တွေရင်တွေကိုကြည့်နေကြဗျ။ဒီနေ့မိန်းမဒီဇိုင်းကိုလဲမြင်ရော….ဒီကောင့်မျက်လုံးတွေဆိုတာ… ကျွတ်ထွက်လာမလားမှတ်ရတယ်..ငမ်းတာငမ်းတာ။ကျနော်လဲ… ဒီနေ့သောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်လားမသိဘူး။ဒီကောင်ကြည့်နေတာကို…စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်ဒီကောင့်ကို… ကျနော့်မိန်းမရဲ့နို့တွေဖင်တွေကိုပြချင်လာတယ်။
အဲဒါနဲ့ဒီကောင့်ရှေ့မှာတင်…မိန်းမကိုဖက်ပြီးကစ်ဆင်ကောက်ဆွဲရင်း….လက်တစ်ဖက်ကမိန်းမဝတ်ထားတဲ့… စကတ်တိုတိုလေးအောက်ကနေနှိုက်ပြလိုက်တယ်။မိန်းမဝတ်ထားတဲ့စကတ်က…ပေါင်ရင်းနားထိရောက်တဲ့…စကတ်တိုတိုလေးလေ။ အောက်ကနေပင့်နှိုက်လိုက်တာနဲ့…ဝတ်ထားတဲ့ဂျီစတထရင်းအောက်က…အဖုတ်ကိုတန်းနေတာပဲ။အဲလိုလုပ်ရင်း… ဒီကောင့်လှမ်းရှိုးလိုက်တော့…ဒီကောင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေက…ပိုပြူးလာပြီး…တံတွေးတွေမြိုချနေတာတွေ့တယ်။ဒီကောင့်လက်တွေက… လက်သီးကိုဆုပ်လိုက်ဖွလိုက်နဲ့ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေတာ။
ကျနော်လဲ…ဘာကြောင့်ရယ်မသိပဲ… ဒီကောင်ရဲ့ပေါင်ခွကြားကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။လားလား..ဒီကောင်က..ကျနော်တို့လင်မယားကိုကြည့်ပြီးလီးတောင်နေတာဗျ။ကျနော့်မိန်းမကိုပစ်မှားပြီး…..တောင်နေတာဘောင်းဘီခွကြားကြီးကိုဖောင်းလို့။ ကျနော်ကမိန်းမကိုကစ်ဆင်ဆွဲနေရာကနေ….နားရွက်လေးတွေကို… လျှာနဲ့အသာတို့သလိုလုပ်ရင်း…မိန်းမကိုကြည့်လိုက်တော့…မိန်းမရဲ့မျက်လုံးတွေကကြာမူပါပါနဲ…ဒီကောင့်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်… ဒီကောင့်ရဲ့ဒုတ်နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ဗျ။ မိန်းမရဲ့လက်တစ်ဖက်က..ကျနော့်ကိုဖတ်ထားတာ။မဖတ်ထားတဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်က…လှုပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး… လက်နေရာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့….ဟိုကောင်မြင်နေရတဲ့ဘက်ခြမ်းက… ပေါင်ကိုပွတ်ပြနေတာ။သူတို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းဆုံနေတာတွေ…မိန်းမကဒီကောင့်ကိုပွတ်ပြနေတာတွေကို… ကြည့်ရင်းကျနော်လဲလီးတောင်လာတယ်။
တောင်တာတောင်မှ… တစ်ခါမှမကြုံဖူးလောက်အောင်တောင်လာတာ။သူတို့နှစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းဆုံနေတာတွေ….မိန်းမကဒီကောင့်ကိုပွတ်ပြနေတာတွေကို …ပိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ကလပ်ကအသံတွေ…ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့လူတွေ..တစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘဲ… ကျနော်တို့သုံးယောက်ထဲရှိသလို ခံစားနေရတယ်။ အဲဒါနဲ့ကျနော်လဲ…ပေါင်ကိုပွတ်နေတဲ့မိန်းမရဲ့လက်ကိုယူပြီး…စကတ်အောက်ကနေ… သူ့အဖုတ်ကိုသူပွတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ဂျီစထရင်းလေးကိုအသာဖယ်ပြီး…လက်တစ်ချောင်းထည့်ကြည့်လိုက်တော့… အရေတွေထွက်နေတာမှရွှဲနေတာပဲ။ထည့်လိုက်တဲ့ကျနော့်လက်ကို…ညှစ်ညှစ်ပေးနေတာ။ အဲဒါမျိုးညှစ်ပေးတာမျိုးက… ချစ်ချစ်အရမ်းဖီးတက်နေတဲ့… အချိန်မျိုးမှဖြစ်တာလေ။(ကျနော်မိန်းမကိုကျနော်က…ချစ်ချစ်လို့ခေါ်တာ.)အဲဒါနဲ့ပဲ…စောက်ဖုတ်ထဲကို… လက်နောက်တစ်ချောင်းပါထပ်ထည့်ပြီး…လက်နှစ်ချောင်းနဲ့အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေလိုက်တယ်။
လူတွေကြားထဲဘော်ဒါရဲ့ရှေ့မှာ…လက်နဲ့လိုးပေးနေတာမျိုးပေါ့။စောက်ဖုတ်ထဲနှိုက်ထားတဲ့လက်နှစ်ချောင်းကို… ချစ်ချစ်ရဲ့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တော့…ချစ်ချစ်ကကျနော့်လက်တွေကို…လီးစုပ်သလိုစုပ်ပေးတယ်။ဘော်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့… နံရံကိုမှီပြီးဘောင်းဘီပေါ်ကနေလီးနေရာကိုပွတ်ပြနေတာ။ မျက်လုံးတွေကတော့…ချစ်ချစ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ချစ်ချစ်စကတ်အောက်… စောက်ဖုတ်နေရာကိုသေသေချာချာကြည့်နေတယ်။ချစ်ချစ်ကိုကြည့်တော့လဲဒီလိုပဲ။ဒီကောင်ရဲ့မျက်နှာတလှည့်… သူ့လီးနေရာကိုတလှည့်သေချာကြည့်နေတာ။ချစ်ချစ်ရဲ့စကတ်ကလဲ…တော်တော်လန်နေပြီး…ဘော်ဒါရဲ့နေရာကကြည့်ရင်… ဝတ်ထားတဲ့ဂျီစထရင်းတောင်….မြင်နေရလောက်တယ်။ ကျနော်လဲ…ကျနော့်ကိုဖက်ထားတဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့လက်ကိုယူပြီး… ကျနော့်လီးကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကျနော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာက… ချောင်ကျပြီးနံရံနဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာလေ။ခဏနေတော့…ချစ်ချစ်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး…ကတဲ့နေရာနားရောက်အောင်ဆွဲခေါ်လာတော့… ချစ်ချစ်ကိုကြည့်ရတာ..ဆွဲခေါ်လာလို့သာလိုက်လာရတယ်…စောစောကနေရာမှာပဲ…ဘော်ဒါကိုပွတ်ပြချင်နေတုံးလို့ထင်တာပဲ။
ကတဲ့နေရာအစွန်နားမှာ….ချစ်ချစ်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖက်ပြီးကနေတော့….ဘော်ဒါလဲလိုက်လာပြီး..ချစ်ချစ်နောက်ကနေလာကတယ်။ ပုံ စံက…မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို…ရှေ့တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ညှပ်ထားသလိုမျိုး။ဘော်ဒါက…ချစ်ချစ်ရဲ့နောက်ကနေ… ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်တွေကိုမထိတထိနဲ့လာလာပွတ်နေတာကို…ကျနော်မြင်နေရတယ်။ အဲလိုကျနော့်မိန်းမဖင်တွေကိုလာပွတ်ရင်းနဲ့….ဒီကောင်ကကျနော့်ကို…အကဲခတ်နေသေးတာ။ကျနော်ကမမြင်ချင်ဆောင်နေတော့… ချစ်ချစ်ဖင်တွေကိုသေသေချာချာလာကိုင်တော့တာပဲ။ ကျနော်လဲချစ်ချစ်ကို… လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲဖက်ပြီး….လက်တစ်ဖက်ကစကတ်အောက်ကနေ… စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်ဘယ်လောက်တောင်… ဖီးလာနေလဲမသိဘူးစောက်ဖုတ်ကထွက်နေတဲ့….အရေတွေကဝတ်ထားတဲ့..ဂျီစထရင်းကိုဖောက်ကျပြီး….ကျနော့်လက်တွေကိုတောင် လာစိုနေပြီ။ဘော်ဒါက…ကျနော်မသိယောင်ဆောင်ပေးတာကိုသိလို့လားမသိဘူး…လက်တစ်ဖက်ကချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကိုကိုင်ပြီးတော့… လက်တစ်ဖက်ကပေါင်တွေကို….ပွတ်ပေးနေတာဗျ။
ကျနော်လဲအဲဒါကိုမြင်တော့…စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိပဲ။ဘော်ဒါကကျနော့်မိန်းမကို…ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာတင်… နှိုက်နေတာကိုမြင်ချင်လာတယ်။ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်နေတဲ့…ကျနော့်လက်နဲ့…ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကိုပွတ်နေတဲ့ဘော်ဒါလက်ကိုဆွဲပြီး… စကတ်ပေါ်ကနေစောက်ဖုတ်ရှိတဲ့…နေရာမှာထားပေးလိုက်တယ်။ပေါင်ကိုပွတ်နေတဲ့လက်ကိုလဲ…နို့ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်ကတော့…ချစ်ချစ်ရဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုပဲကိုင်ပြီး… နောက်ကိုနဲနဲခွာလိုက်တာပေါ့။ဘော်ဒါကသူ့လီးနဲ့ချစ်ချစ်ဖင်တွေကို… ပွတ်နေတာဖြစ်မယ်။ချစ်ချစ်ကဖင်တွေကိုနောက်ကိုကော့ပြီး…စကောဝိုင်းနေတာတွေ့တယ်။ဘော်ဒါရဲ့လက်တစ်ဖက်… စကတ်ပေါ်ကနေစောက်ဖုတ်ကိုပွတ်။နောက်လက်တစ်ဖက်..နို့နှစ်လုံးကိုပယ်ပယ်နယ်ကိုကိုင်နေတာ။
တစ်ချက်တစ်ချက်လဲပေါင်အတွင်းသားတွေကို…ပွတ်နေတာတွေ့တယ်။ချစ်ချစ်ရဲ့မျက်လုံးတွေက…အရည်တွေလဲ့ပြီး… ကျနော့်ကိုစူးစူးရဲရဲကိုကြည့်နေတာ။ကျနော်လဲ…အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး…လီးကတောင်လွန်းလို့နာတောင်နာလာတယ်။ ဒီတစ်ခါ… ချစ်ချစ်နဲ့ဘော်ဒါမျက်နှာချင်းဆိုင်..ပွတ်နေတာကိုမြင်ချင်လာတာနဲ့..ချစ်ချစ်ကိုကျနော့်ဘက်ပြန်ဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ဘော်ဒါကကပ်ပြီးပါ လာလို့…ဒီကောင့်လက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်မှပဲ…ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ကျနော့်ဆီကိုရောက်လာတဲ့…ချစ်ချစ်ကိုကစ်ဆင်ဆွဲပြီး… ဖင်နှစ်လုံးကိုကြမ်းကြမ်းလေးညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့… ကိုယ်ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပြီး…ချစ်ချစ်ကိုဘော်ဒါဆီပြန်တွန်းပို့လိုက်တော့… ဟိုကောင်ကလဲဆီးဖက်တာပေါ့။ချစ်ချစ်ကလဲပြန်ဖက်လိုက်တာတွေ့တယ်။ ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ… ခေါင်းလေးငုံ့လို့။ဘော်ဒါရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံးက…ချစ်ချစ်ဖင်တွေကိုညှစ်နေတာ။ကျနော်လဲ…ဘော်ဒါလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး… ချစ်ချစ်ဘော်ဒါကြားရှေ့ကိုတွန်းပို့…နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုချစ်ချစ်ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့… ချစ်ချစ်ရဲ့ခါးကိုစုံကိုင်ပြီးသူ့ဖင်တွေကို…ကျနော့်လီးနဲ့ထောက်လိုက်တာပေါ့။
ချစ်ချစ်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့…ဘော်ဒါရဲ့လက်ကစကတ်အောက်ကနေနှိုက်လိုက်တာဖြစ်မယ်။ချစ်ချစ်ဖင်တွေနောက်ကိုပိုကော့လာပြီး… ကျနော့်လီးကိုစောစောကဘော်ဒါကို…လုပ်သလိုစကောဝိုင်းလာတယ်။တစ်ကယ်မိုက်တယ်ဗျာ။ မြင်ကတာကရော..ဖင်နဲ့ပွတ်ပေးတာရောကောင်းလွန်းလို့… ပြီးချင်သလိုတောင်ဖြစ်လာလို့..မနည်းထိန်းလိုက်ရတယ်။ဘော်ဒါကိုဖက်ထားတဲ့…ချစ်ချစ်လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး… ဘော်ဒါရဲ့ဘောင်းဘီရှေ့နားကို…ပို့ပေးလိုက်တော့..ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ဖောင်းနေတဲ့…ဘောင်းဘီခွကြားကိုပွတ်တော့တာပဲ။ ကလပ်ထဲမှာသာမဟုတ်ရင်…ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါကိုဘောင်းဘီချွတ်ပြီး…လီးကိုကိုင်မလားမသိဘူး။အခုလိုဘော်ဒါကိုနှိုက်ခိုင်း… ဘော်ဒါရဲ့လီးကိုကိုင်ခိုင်းတာကို…ချစ်ချစ်ကမငြင်းတဲ့အပြင်ဘာမှမပြောဘူး။သူကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်နေတာ။မူးနေတာရော… ကျနော်မဟုတ်တဲ့တခြားယောက်ျားရဲ့အထိအတွေ့ကို…လိုချင်နေတာရောပါမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ… ရုတ်ရုတ်ဖြစ်ပါလေရော။အဲဒါနဲ့..ကျနော်လဲချစ်ချစ်လက်ကိုဆွဲပြီး…အပြင်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘော်ဒါလဲ… နောက်ကနေကပ်လိုက်လာပြီး…
“ပြန်တော့မလို့လားကွ..အစောကြီးရှိသေးတယ်လေ.. ခဏနေကြရင်ငြိမ်သွားမှာပါ…အဲဒီတော့ပြန်ဝင်ကြတာပေါ့” “မဟုတ်ဘူးကွ.ဟော်တယ်ကိုဒိုးတော့မယ်…ဒီနေ့အိမ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်နေလို့..လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရအောင်… ဟော်တယ်မှာသွားအိပ်မလို့. ဘိုကင်တောင်လုပ်ထားပြီးပြီ” “တင်းနေတာတွေကပေါက်ထွက်တော့မယ်… လျှော့ဖို့လိုအပ်နေပြီေ..လဟုတ်တယ်မလား ချစ်ချစ် ” ဘော်ဒါကိုပြောရင်း…မိန်းမကိုပါပြောလိုက်တယ်။မိန်းမကတော့…ကျနော့်ကိုဖက်ထားပြီးဘာမှပြန်မပြောဘူး။ဘော်ဒါက… “ငါတို့ရပ်ကွက်မှာမီးပျက်နေတာ…ပျင်းစရာကြီးမင်းတို့နဲ့ ဟော်တယ်မှာပဲလိုက်အိပ်တော့မယ်..စကားလေးဘာလေးပြောရတာပေါ့ ” ” အေး အဲဒါတော့.. မင်းသဘောပဲ ” ဟော်တယ်ရောက်တော့…ဘော်ဒါက..ရီဆက်ရှင်မှာအခန်းယူရင်းကျန်နေခဲ့တယ်။ကျနော်တို့လင်မယားကတော့… ဘိုကင်လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့…အခန်းထဲကိုတန်းသွားတာပေါ့။အခန်းတံခါးပိတ်ပြီးတာနဲ့…တံခါးဝမှာပဲမိန်းမကို…ကစ်ဆင်ဆွဲရင်း… အင်္ကျီတွေစကတ်တွေကို…ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲချွတ်လိုက်ရင်း…ကျနော့်အဝတ်အစားတွေကိုပါချွတ်လိုက်တယ်။ ဘရာနဲ့ဂျီစထရင်းလေးကိုတော့မချွတ်သေးဘူး။ကျနော်က..ဘရာနဲ့ဂျီစထရင်းဝတ်ထားရင်း… လိုးရတာကိုအရမ်းကြိုက်တာ။မိန်မရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်လိုက်တော့…အရေတွေကထွက်နေတုံးပဲ။မိန်းမကလည်း… ကျနော့်လီးကိုအတင်းပဲဆွဲနေတာ။သူလဲ…အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီနဲ့တူတယ်။
ကျနော်လဲ…လက်တစ်ဖက်ကစောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်။နောက်လက်တစ်ဖက်က..စောက်ဖုတ်အရေတွေနဲ့စိုအောင်လုပ်ပြီး… ဖင်ပေါက်ထဲကိုပါအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။စောက်က်ဖုတ်နဲ့ဖင်ပေါက်ကို..တပြိုင်နက်ထဲကလိပေးနေတာလေ။ဖင်ကကျနော် လိုးနေကျဆိုတော့…လက်ချောင်းလောက်ကတော့ရှောရှောရှူရှူပဲ။ စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ကိုနှိုက်နေရင်း… “ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို..အခုကိုကိုနှိုက်ပေးတာနဲ့ စောစောကကိုကို့ဘော်ဒါနှိုက်ပေးတာ..ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။ပြီးတော့… ကိုကိုလီးနဲ့ဟိုကောင့်လီး…ဘယ်သူ့ဟာပိုကြီးလဲဟင် ချစ်ချစ်” ” ကိုကို ကလဲ ဘာတွေမေးနေမှန်းလဲ. မသိဘူး ” ” ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုဟိုကောင်နှိုက်နေတာ. သူ့လီးကို. ချစ်ချစ်ပွတ်ပေးနေတာ..ကိုကိုမြင်နေတာပဲဟာ.. ပြောစမ်းပါချစ်ချစ်ရဲ့ ” “ချစ်ချစ်လဲဟိုကောင်နှိုက်ပေးတာ …သူ့လီးကို ကိုင်ရတာဖီးလာတယ်မလား ” “ကိုကိုနှိုက်တာကျတော့…ကိုကိုကချစ်ချစ်ယောက်ျားလေ။ ကိုကို့သူငယ်ချင်းနှိုက်တာကျတော့…သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်လေ။…ပြီးတော့…ကိုကိုရှေ့တင်အနှိုက်ခံနေရတာဆိုတော့… ပိုကောင်းတယ်ထင်တာပဲ။သူ့လီးကကိုကိုထက်ပိုကြီးတယ်ထင်တယ်။ဘောင်းဘီပေါ်ကကိုင်ရတာကို..သိသာတယ် ဟိဟိ.. ”
” အဲဒါဆို…အခုသူ့လီးနဲ့လိုးတာမခံကြည့်ချင်ဘူးလား” လို့မေးလိုက်မိတယ်။ဘာလို့အဲလိုမေးလိုက်မိမှန်း… ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မသိလိုက်ဘူး။ “ကိုကိုကကြည်ဖြူလို့လား… ” “ကိုကိုမိန်းမလေးကို…ခံစားမှုအသစ်လေးတွေနဲ့… ရင်ခုန်စေချင်လို့ပါ။ကိုကိုမိနးမနဲ့..တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်လိုးနေတာကိုလဲ..ကိုကိုကြည့်ချင်နေတာ။အခုချစ်ချစ်ကို… ကိုကိုနှိုက်နေသလို…စောက်ဖုတ်ကိုတစ်ယောက်…ဖင်ကိုတစ်ယောက်…တူးအင်ဝမ်းလိုးမယ်လေ” အဲဒီလိုပြောနေရင်းနဲ့…ဘော်ဒါက..ကျနော့်မိန်းမကိုတက်လိုးနေတဲ့မြင်ကွင်းကို… ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွပေါ်လာတယ်။ကျနော်မဟုတ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်က…မိန်းမကိုလိုးနေတဲ့အချိန်… မိန်းမရဲ့တုံ့ပြန်မှုက..ဘယ်လိုနေမလဲသိချင်လာတယ်။ ” ကိုကိုပြောနေတာနဲ့ ချစ်ချစ်လေ… စောက်ဖုတ်ထဲကရော.. ဖင်ထဲကရော.. ယားလာပြီကွာ။ကြမ်းကြမ်းလေးနှိုက်ပေးပါ။ တစ်ကယ်တောင်..အလိုးခံချင်လာပြီ ဟိဟိ ”
အဲဒီအချိန်မှာပဲ…တံခါးခေါက်သံထွက်လာတယ်။ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လုံးလန့်သွားတာပေါ့။တံခါးလာခေါက်တဲ့လူကို… တော်တော်တင်းသွားတယ်။အဲဒါနဲ့ရေချိုးခန်းထဲက…တဘက်တွေယူပြီး..မိန်းမကရင်လျှားလိုက်သလို… ကျနော်လဲတဘက်ပတ်လိုက်ပြီး…တံခါးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘော်ဒါဖြစ်နေတယ်။ ဘော်ဒါကစပ်ဖြီးဖြီးနဲ့… “ငါ့မှာဆေးလိပ်ပါမလာလို့…မင်းမှာရှိသေးလားလို့..လာတောင်းတာ.. ဟီးဟီး ” “မင်းတော်တော်နှောင့်ယှက်တဲ့ကောင်ပဲ…ကောင်းခန်းရောက်နေပြီဟ ” ” ဟာ…ကောင်းခန်းရောက်နေပြီလား… ငါလည်း…အဲဒီကောင်းခန်းကိုကြည့်ချင်နေတာ ဟီးဟီး” ကျနော်လဲ…ဘော်ဒါကမိန်းမကိုလိုးတဲ့အကြောင်းပြောနေရင်း…ဘော်ဒါရောက်လာတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့…အကြံတစ်ခုကို… ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့…ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
“စောက်ခွက်ပြောင်မနေနဲ့..ဆေးလိပ်ဗူးကပိုက်ဆံအိတ်ဘေးနားမှာ..ထားထားတယ်။ ယူမသွားနဲ့…ဆေးလိပ်ကနဲနေပြီ.. အခန်းထဲမှာပဲသောက် ” လို့ပြောပြီး…ဘော်ဒါအခန်းထဲဝင်ဘာတာနဲ့… တံခါးကိုလော့ချလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်က..တဘက်ကိုရင်လျှားပြီးကတင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာ။ဘော်ဒါက..ချစ်ချစ်ရဲ့ရှေ့နားကခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီး …ဆေးလိပ်သောက်တယ်။ကျနော်လဲချစ်ချစ်ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး…ချစ်ချစ်ကိုဖက်လိုက်ရင်း… “အနှောင့်အယှက်ကောင်က… ဆေးလိပ်သောက်ချင်လို့တဲ့မိန်းမရေ…ကောင်းခန်းရောက်နေပါပြီဆိုတာတောင်…ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး…အခွက်လာပြောင်နေသေးတယ် ” ” ချစ်ချစ်ကတော့…ဂရုမစိုက်ပေါင်…ပရိတ်သတ်ရှိလို့ကတော့ ..ပိုတောင်လုပ်ပြလိုက်အုံးမယ် ” ချစ်ချစ်ကအဲလိုလဲပြောရော… ဘော်ဒါကလက်ခုပ်ထတီးတယ်။ကျနော်လဲချစ်ချစ်ရင်လျှားထားတဲ့…တဘက်ကိုခါးထိရောက်အောင်ဖြေချကာ…
ဘရာထဲကိုလက်ထဲ့လိုက်ပြီး…နို့တွေကိုနှိုက်လိုက်တယ်။ချစ်ချစ်က…ပိုတောင်ဟော့နေသေးတယ်။တဘက်ကိုလုံးဝဖယ်လိုက်ပြီး… ပေါင်ကိုကားစောက်ဖုတ်ကို…ပင်တီပေါ်ကနေပွတ်ရင်း..ဘော်ဒါကိုကြည့်နေလိုက်သေးတယ်။ ဘော်ဒါရဲ့မျက်လုံးတွေက… ချစ်ချစ်ရဲ့ပေါင်ကြားမှာ။ချစ်ချစ်လဲစောက်ဖုတ်ကို…ပင်တီပေါ်ကနေပွတ်နေယုံမဟုတ်တော့ဘဲ… အထဲကိုလက်ထည့်ပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကိုအသွင်းအထုတ်ပါလုပ်တာ။ ကျနော်လဲ…ဘော်ဒါပိုမြင်အောင်ဘောင်းဘီလေးကို… တစ်ဖက်ကပ်ပေးလိုက်ပြီး…ပေါင်တွေကိုလဲပိုဖြဲပေးလိုက်တယ်။ဘော်ဒါက…ထိုင်ခုံမှာမှီထိုင်နေရာကနေ…ကိုယ်ကိုရှေ့ကိုင်းပြီး… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုသေချာကြည့်နေတာ။ချစ်ချစ်ကထိုင်နေရာနေထပြီး…ဘော်ဒါရှေ့မှာဖင်ကုန်းပြီး…ကျနော့်လီးကိုစုပ်ပေးတယ်။ ချစ်ချစ်ရဲ့လက်တွေကတော့…သူ့စောက်ဖုတ်ကိုသူနှိုက်နေတုံးပဲ။ဘောင်းဘီလေးက..ကျနော်ဘေးကပ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့… ဘော်ဒါထိုင်နေတဲ့နေရာကကြည့်ရင်…ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုရော…နှိုက်နေတဲ့လက်တွေကိုရော…လက်ချောင်းတွေစောက်ဖုတ်ထဲ… ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်…ဖြစ်နေတာတွေကိုရော..အနီးကပ်မြင်နေရမှာလေ။ဘော်ဒါလဲ…ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို ယက်ချင်နေလားမသိဘူး။
နှုတ်ခမ်းတွေလျှာတွေသပ်နေတာ။ချစ်ချစ်က…သူ့လက်နောက်တစ်ဖက်နဲ့သူ့ဖင်ထဲကိုသူ… ထပ်တောင်နှိုက်နေလိုက်သေးတယ်။ကျနော့်လီးကိုစုပ်နေရာကနေ..မျက်နှာနားကပ်လာပြီး “ကိုကို..ချစ်ချစ်ရေချိုးခန်းထဲသွားလိုက်အုံးမယ်…ကိုကို့ဘော်ဒါကိုမေးလိုက်ပါအုံး… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုလုပ်ချင်ရဲ့လားလို့….တော်ကြာ..ချစ်ချစ်တို့ကလုပ်ခိုင်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဖြစ်နေအုံးမယ်။.”ခိခိ… ကိုကို့ဘော်ဒါချစ်ချစ်ကိုလိုးချင်တယ်ဆိုလည်း…ချစ်ချစ်ဘာတွေကြိုက်တယ်ဆိုတာ . ပြောထားလိုက်အုံး။ ကိုကို့ ကိုမှ မမှီရင် sorry ပါလို့ . ခစ်ခစ် ” ပြောပြီးထွက်သွားတော့…ဘော်ဒါက…လမ်းလျှောက်လို့ လှုပ်သွားတဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်တွေကို..သွားရည်တမြားမြားနဲ့လိုက်ကြည့်နေတာ။ “ဟေ့ကောင်…ဇာတ်ကြီးလဲ လိမ်သွားအုံးမယ်. ..” “မင်းမိန်းမကလှလွန်းလို့လိုက်ကြည့်မိတာပါကွာ..စောက်ဖုတ်လေးနဲ့ဖင်လေးကို… အနီးကပ်မြင်လိုက်ရတော့..ငါ့စိတ်တွေတောင်ထိန်းလို့မရတော့ဘူး…။မင်းမိန်းမသာမဟုတ်ရင်… ငါဆွဲပြီးကောင်းကောင်းယက်ပစ်လိုက်တယ်… ။
စောက်ဖုတ်လေးက..အရေတွေကိုစိုပြီး..နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကအိနေတာပဲဟီးဟီး.တစ်ကယ်ပြောရရင်..စောက်ဖုတ်လေးကိုရောဖင် ကိုရော..ပယ်ပယ်နယ်နယ်ယက်ပြီးတော့… လိုးပလိုက်ချင်တာ….” “အေး..ဟုတ်ပြီလေငါ့မိန်းမကလဲမင်းလီးကိုရင်ခုန်နေတာ။ငါလဲ… တူးအင်ဝမ်းစမ်းချင်နေတယ်..။ဒါပေမယ့်…ငါ့မိန်းမနဲ့ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းလုပ်ရမယ်… ။မင်းသဘောနဲ့မင်း..ဘာမှမလုပ်ရဘူး..။ငါဒါမှမဟုတ်..ငါ့မိန်းမကစိတ်မပါတော့ဘူးဆိုတာနဲ့…မင်းရပ်ရမယ်…။အဲဒီအချက်တွေကို… မင်းသဘောတူတယ်ဆိုရင်တော့.မင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမှာပေါ့..။သဘောမတူဘူးဆိုရင်တော့…မင်းပြန်လို့ရပြီ…။” “သဘောတူပါတယ်ကွာ…မင်းတို့စိတ်တိုင်းကျရပါစေမယ်..။ ဟီးဟီး.. မင်းပြောတာကိုသာမင်းမဖျက်နဲ့ .. ” “အေး.. ငါချစ်ချစ်ပြန်ထွက်လာရင် ပြောကြည့်လိုက်မယ်” ကျနော်တို့ပြောနေတုံးမှာဘဲ..ချစ်ချစ်ကရေချိုးခန်းထဲမှပြန်ထွက်လာပြီး…ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာလာရပ်ရင်း “ကိုကိုတို့..ဘာတွေပြောနေကြတာလဲ..ချစ်ချစ်ကိုမဟုတ်တာတွေ..ကြံစည်နေတာမလား … ” “မဟုတ်တာတွေမဟုတ်ပါဘူး…ဟုတ်တာတွေပါချစ်ချစ်ရဲ့.. ဒီကောင်က…ဒီညချစ်ချစ်ကိုမချစ်ရရင်သေရပါတော့မယ်တဲ့… ချစ်ချစ်သဘောကျ…စိတ်တိုင်းကျရပါစေမယ်တဲ့…ချစ်ချစ်သဘောကိုမေးမလို့..စောင့်နေတာ…။”
“လူ့အသက်တစ်ချောင်းကယ်ကောင်းပါတယ်….ကိုကို့ဘော်ဒါက…ချစ်ချစ်ကိုတက်သာမလုပ်ရသေးတာ…။ချစ်ချစ်နို့တွေကိုရော… စောက်ဖုတ်ကိုရော..နှိုက်ထားတာမှပယ်ပယ်နယ်နယ်ရယ်…။အသက်တစ်ချောင်း…ကယ်လိုက်ပါမယ်လေ…ဟိဟိ….ဒါပေမယ့်… ချစ်ချစ်စိတ်တိုင်းမကျတော့ရင်တော့…ချက်ချင်းရပ်ပစ်ရမယ်…” “ချစ်ချစ်သဘောတူတယ်ဆိုတော့…ချစ်ချစ်ကို..ကိုကိုမေးမလို့… ကိုကို့ကိုလဲ.မချန်ထားရဘူးနော် ” “မချန်ထားပါဘူး…. ကိုကိုရဲ့ ” “ဒါဆိုချစ်ချစ်…ဘယ်သူ့ကိုအရင်ရွေးမှာလဲ ” “ကိုကိုသူငယ်ချင်းအသက်ကို… အရင်ကယ်လိုက်ပါမယ်ကိုကိုရယ်..။တော်ကြာသေသွားမှဖြင့်..ချစ်ချစ်တို့အမှုပါတ်နေပါအုံးမယ်….ကိုကို့..ကိုရှယ်ပြန်ပြုစုပေးမှာပါနော် …။ကိုကိုတို့ပြောနေတာနဲ့…ချစ်ချစ်စိတ်တွေအရမ်းလာနေပြီကွာ…။အပြောလေးတွေရပ်ပြီးအလုပ်လေးတွေစရအောင် .. ” “ကဲ..ဟိုလူကြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီပဲချန်ပြီး..ကျန်တာတွေအကုန်ချွတ်…ချစ်ချစ်ဆီကိုဒူးထောက်လာခဲ့.စောက်ဖုတ်ယက်ခိုင်းမလို့…” ဘော်ဒါလဲ….ချစ်ချစ်ပြောတာနဲ့အဝတ်တွေချွတ်ပြီး..ချစ်ချစ်နားကိုဒူးထောက်ပြီးသွားတယ်။ချစ်ချစ်ကမတ်တပ်… ဘော်ဒါကဒူးထောက်ရက်သားဆိုတော့…ချစ်ချစ်ရဲ့နို့တွေနဲ့သူ့မျက်နှာနဲ့ကတန်းနေတာပေါ့။ “ချစ်ချစ်ရဲ့နို့တွေကိုလျှာနဲ့ယက်ပေး…ပြီးရင်ဗိုက်သားတွေ… ပြီးရင်ပေါင်နှစ်ဖက်…လက်တွေကဖင်တွေကိုညှစ်ပေး…..” ဘော်ဒါလဲ… ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနို့တွေကိုလျှာနဲ့ယက်… အဲဒီကနေဗိုက်လေးတွေကိုလျှာနဲ့ယက်ရင်း….တဖြေးဖြေအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ဒီကောင်လျှာနဲ့ယက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ… တံတွေးတွေစိုပြီးကျန်နေခဲ့တာ။ချစ်ချစ်လက်တစ်ဖက်က..သူ့နို့တွေကိုသူညှစ်လိုက်… စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်လိုက်နဲ့။နောက်လက်တစ်ဖက်က…ဘော်ဒါရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးတော့…သူယက်စေချင်တဲ့နေရာတွေကို… ထိန်းပြီးပြပေးနေတယ်။
ချစ်ချစ်က..ဘော်ဒါရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးခွာလိုက်တယ်။ပြီးတော့…ဘော်ဒါရဲ့ပခုံးပေါ်ခြေထောက်တစ်ဖက်တင်လိုက်ပြီး… သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုကပ်ပေးလိုက်တယ်။ကျနော်လဲ…ဘော်ဒါချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ယက်နေတာကိုကြည့်ပြီး…ကျနော်တောင် ဝင်ယက်ချင်လာတယ်။ ဘော်ဒါရဲ့လက်တွေကတော့…ဖင်တွေကိုညှစ်နေတုံးပဲ။ချစ်ချစ်ကဘောင်းဘီပေါ်ကနေပဲ… အယက်ခံနေရတာအားမရလို့ထင်ယ်။ဘောင်းဘီတစ်ဖက်ဆွဲလိုက်တယ်။… စောက်ဖုတ်ပေါ်လာအောင်ဖေါ်ပေးလိုက်ပြီး..စောက်ဖုတ်အယက်ခံရင်းသူ့ဟာနဲ့… ဘော်ဒါရဲ့မျက်နှာကိုပွတ်နေတာ။ဘော်ဒါရဲ့မျက်နှာမှာ..စောက်ရေတွေရော..သူ့တံတွေးတွေရောပေပွပြီး…ရွှဲနေတာပဲ။ ချစ်ချစ်က
“”ဘောင်းဘီချွတ်ပေးတော့ကွာ…” အစိကိုစုပ်ရင်းအထဲကိုနှိုက်ပေး….အစိအစုပ်ခံရင်းစောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံနေရင်း… ချစ်ချစ်ပိုဟော့လာတယ်ထင်တယ်။ “အား…ကောင်းလိုက်ာ….ကျမရဲ့စောက်ပတ်ကိုယက်ပေးစမ်းပါ…လက်တွေနဲ့လဲ… နှိုက်ပေးစမ်းပါ..အား..မိုက်တယ်ကွာ. အရမ်းကောင်းတာပဲ .” လို့ထုတ်ပြောလာတဲ့အပြင်…ဘရာကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး… သူ့နို့တွေကိုသူပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုညှစ်လာတယ်။သူ့ဖင်ပေါက်ကိုပါ…သူနှိုက်လာတာတွေ့ရတယ်။ “အား…ကောင်းလိုက်တာရှင်ရယ်…ဖင်ပါအယက်ခံချင်လာပြီ…ကုတင်ပေါ်မှာကုန်ပေးမယ်..ဖင်ဖြဲပြီးဖင်ယက်ပေးပါအုံး.. ” ချစ်ချစ်ကတင်စောင်းမှာကုန်းပေးတော့…ဘော်ဒါကနောက်ကနေဖင်ဖြဲပြီး…စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ကိုလျှာအပြားလိုက်နဲ့ယက်ပေးနေတာ။
“အားမိုက်တယ်ကွာ…စောက်ပတ်ထဲလက်နဲ့နှိုက်ပေးအုံး…ဖင်ပေါက်ကိုပါလျှာနဲ့ထိုးပေး…အား.ကောင်းတယ်ကွာ….ဖင်ထဲဝင်လာပြီ… ဟုတ်တယ်…အဲဒီလိုထိုးခိုင်းတာ…အမလေး…အရမ်းမိုက်လိုက်တာ…အရမ်းကောင်းလာပြီ…အဲဒီအတိုင်းဆက်ထိုးပေး….ပြီးတော့မယ်…စောက်ပတ်ထဲကလက်ကိုလဲ သွက်သွက်လေး….” ပြောရင်းနဲ့… သူ့အစိကိုသူ့လက်နဲ့ပွတ်ကာဖင်ကြီးယမ်းခါပြီးမှောက်ကျသွားတယ်။ဘော်ဒါလဲ… ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပက်လက်ကြီးလန်သွားတယ်။ဘာဂျာအသားကုန်ပေးလိုက်ရတော့ပြိုင်းသွားမှာပေါ့။ကျနော်လဲ… ချစ်ချစ်ဘေးမှာသွားလှဲရင်း…ချစ်ချစ်ရဲ့နဖူးလေးကို…အသာအယာနမ်းလိုက်ပြီး…ဆံပင်လေးတွေကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်… အမောပြေပြီထင်တဲ့ အချိန်မှ.. “မောသွားလား ကိုကို့မိန်းမလေး ” “အင်း နဲနဲတော့မောတယ် ” “ကောင်းရောကောင်းရဲ့လား” “ကောင်းတယ်…ကိုကို့ဘော်ဒါက…ဖင်ထဲကိုလျှာနဲ့ထိုးပေးတာ…စောက်ရမ်းမိုက်တယ်…။ကိုကိုရောကြည့်လို့ကောင်းလား” “ကောင်းတာပေါ့မိန်းမရဲ့…မိန်းမပြီးသွားတာမလား” “အင်း.ပြီးသွားတယ်..ဒါပေမယ့်စောက်ဖုတ်ထဲမှာယားနေတုံးပဲ… အလိုးခံချင်နေသေးတယ်…။ကိုကိုသူငယ်ချင်းလီးကြီးက…ဘောင်းဘီထဲမှာဖုထွက်နေတာကြည့်ပြီး… အသဲတွေယားပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကပါလှိုက်လှိုက်ပြီး ယားလာတာ ဟိဟိ” ” ဒါဆိုသူ့လီးနဲ့ အရင်ခံမှာပေါ့ ဟုတ်လား ” “ဟုတ်…ပြီးမှ…ကိုကို့အတွက်ရှယ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်.ကိုကိုရဲ့..ကိုကိုပဲချစ်ချစ်ကို…ကိုကို့သူငယ်ချင်းလိုးတာကြည့်ချင်တယ်ဆို” “အေးပါ..အေးပါ…ဟုတ်ပါပြီ…” “ကိုကို့သူငယ်ချင်းကိုမေးကြည့်ပါအုံး…အမောပြေပြီလားလို့…ချစ်ချစ်က ရယ်ဒီပါလို့ ” “ကဲ…ဟေ့ကောင်ငါ့မိန်းမကမင်းကိုခေါ်နေပြီ..ဘယ်လိုလဲလက်နက်ချသွားပြီလား…ဒါဆိုရင်တော့..ပွဲကြည့်ပရိတ် သတ်ပဲလုပ်တော့တဲ့ ” “လက်နက်ဘယ်ချမလဲကွာ…သေရင်သေပစေဟိဟိ”လို့ပြောရင်း…ကျနော်နဲ့ချစ်ချစ်လှဲနေတဲ့ဘေးနားရောက်လာတယ်။ “ချစ်ချစ်ကဒါရိုက်တာလုပ်မယ်…ကိုကိုတို့ကချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြ…..ကဲအခုချစ်ချစ်နို့ကို…နှစ်ယောက်တူတူစို့ပေး… ။
ကိုတို့စို့ပေးနေရင်း.ချစ်ချစ်က…လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို ကိုင်ထားချင်လို့…” ကျနော်နဲ့ဘော်ဒါလဲ… ချစ်ချစ်ရဲ့နို့နှစ်ဖက်ကိုပြိုင်တူစို့လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ…ချစ်ချစ်ကလီးနှစ်ချောင်းလုံးကိုကိုင်ပြီးဂွင်းထုပေးနေတာ။ “အား..နို့နှစ်ဖက်လုံးအစို့ခံရတာမိုက်တယ်ကွာ…ကိုကိုကချစ်ချစ်ဖင်ပေါက်ထဲကိုနှိုက်ပေးကွာ…ရှင်ကစောက်ပတ်ထဲကိုနှိုက်ပေး… အားပါးပါး…တကယ်မိုက်တယ်ကွာ…စောက်ပတ်ရော..ဖင်ရောနို့တွေရော..တကယ်ထိတယ်ကွာ” ကျနော်တို့လဲ… ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနို့စို့နေရင်း..စောက်ဖုတ်ထဲရောဖင်ထဲရောနှိုက်ပေးလိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်ထဲကအရေတွေကစီးကျနေတာဆိုတော့ …ဖင်ပေါက်ကိုဆီဆွတ်စရာတောင်မလိုဘူးဖြစ်နေတယ်။ “ကဲကွာ..ဒီတစ်ခါစောက်ပတ်ကိုရောဖင်ကိုရော…အတူတူ ယက်ပေးကြကွာ…ကိုကိုကပက်လက်လှန်လိုက်ဆိုပြီး…”
ကျနော့်ပေါ်ကိုပြောင်းပြန်တက်ခွလာတယ်။ကျနော်လဲမျက်နှာရှေ့ရောက်လာတဲ့..ချစ်ချစ်စောက်စိလေးကို..သကြားလုံးစုပ်သလိုအရင်စုပ် လိုက်ပြီး…ယက်ပေးနေလိုက်တယ်။ဘော်ဒါကလဲဖင်ဖြဲပြီး…ဖင်ပေါက်လေးကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ယက်ပေးနေတာကိုလဲတွေ့နေရတယ်။ ဒီတစ်ခါ… စောက်ပတ်နဲ့ဖင်တပြိုင်နက်..အယက်ခံနေရတဲ့ချစ်ချစ်ဆီက..ဘာသံမှထွက်မလာတော့ဘူး။ကျနော့်လီးကိုစုပ်နေလို့လေ။ကျနော်လဲ… အရမ်းကောင်းလာတာနဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့ခေါင်းကိုထိန်းကာကော့ကော့ပြီး… ပါးစပ်ကိုလိုးလိုက်တော့..ချစ်ချစ်လဲကျနော်ပြီးချင်လာတာသိလို့ထင်တယ်။အားပြင်းပြင်းနဲ့စုပ်ပေးတဲ့အပြင်… သူ့ပါးစပ်ထဲဝင်လာတဲ့လီးကို…လျှာနဲ့ပါထိန်းပြီးယက်ပေးလာတယ်။ လက်တစ်ဖက်က…ဥတွေကိုလာပွတ်ပေးတော့… ကျနော်လဲမထိန်းနိုင်တော့ပဲ..သူ့ပါးစပ်ထဲကိုအရေတွေပန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ကျနော်ပြီးသွားပြီး… အရေတွေကုန်သွားတဲ့ထိစုပ်ပေးရင်း…အရေတွေကမျိုချပေးတာ။ချစ်ချစ်က..ကျနော်နဲ့ဘော်ဒါကြားကိုလှိမ့်ဆင်းလာပြီး… ကျနော့်ကိုလာဖက်ထားတယ်။သူ့ဖင်တွေကတော့ဟိုကောင့်ဖက်ကိုပစ်ထားတုန်း။ဘော်ဒါကလဲဖင်ဖြဲပြီးယက်နေတုန်းပဲ။
“ကောင်းလား ကို ” “ကောင်းတာပေါ့ကွယ်…ကိုကို့မိန်းမလေးကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ..” “ကိုကို့အရေတွေမျိုချပြီးတော့… စောက်ဖုတ်ထဲကလေ..အရမ်းယားလာတာသိလား..။စောက်ဖုတ်ကိုလီးနဲ့အလိုးခံချင်နေပြီကွာ…ကိုကို့ဘော်ဒါကို… လိုးခိုင်းလိုက်ရတော့မလား…။ကိုကိုက…အားမွေးရင်းနဲ့ကြည့်နေပေါ့..။ကိုကို့ဟာပြန်တောင်လာမှ…ကိုကို့အတွက်… ရှယ်အစီအစဉ်စကြတာပေါ့” “အေးပါကွယ် ဟုတ်ပါပြီ ချစ်ချစ် သဘော ” “ဟိုလူကြီးလုပ်တော့ကွာ…ချစ်ချစ်လိုချင်နေပြီ… ချစ်ချစ်ကိုင်ပြီးထည့်ပေးမယ်…ရှင့်ဟာကြီးကအကြီးကြီး…ချစ်ချစ်ဟာလေးကွဲသွားမှာစိုးလို့…” ချစ်ချစ်က…ဒူးထောင်ပေါင်ကားပေးလိုက်တော့…ဟိုကောင်ကကွန်ဒုံးစွပ်လိုက်ပြီး… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကိုသူ့လီးကြီးတေ့ပေးတယ်။တေ့ထားတဲ့လီးကိုချစ်ချစ်ကကိုင်ပြီးတော့..မထည့်သေးပဲနဲ့… စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်းပွတ်နေသေးတာ။လီးထိပ်နဲ့လဲ…စောက်စိကိုထိုးနေသေးတာတွေ့ရတယ်။
ပြီးတော့မှစောက်ဖုတ်ထဲကိုထိုးထည့်တော့… ဘော်ဒါကအပေါ်ကနေ..အလိုက်သင့်ဖိထည့်ပေးတာ။လီးကြီးတစ်ခါတည်းအဆုံးထိဝင်သွားမှာစိုးလို့ထင်တယ်။လီးကိုကိုင်ထားတဲ့လက် ကိုတော့မလွှတ်သေးဘူး။ “အား….ဝင်လာပြီ..ပြည့်သိပ်နေတာပဲကွာ…အဆုံးထိမထည့်နဲ့အုံး…ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးအုံး… ကျပ်သိပ်နေတာပဲကွာ..” ဟုတ်တယ်ဗျာလီးကြီးကကြီးနေတော့…စောက်ပတ်အဝလေးဆိုတာ… ဝလုံးလေးလိုဝိုင်းနေတာ။ချစ်ချစ်လက်တစ်ဖက်က…သူ့အစိလေးကိုသူပွတ်နေသေးတယ်။ “အားပါးပါး…မိုက်တယ်ကွာ…ဖြေးဖြေးနဲ့အဆုံးထိဝင်အောင်သွင်းတော့ ကွာ ” ဘော်ဒါလဲချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း..သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံးစောက်ဖုတ်ထဲအဆုံးထိဝင်သွားတယ်။လီးကိုအဆုံးထိ ထုတ်…အဆုံးထိပြန်သွင်းနဲ့လိုးပေးနေတဲ့…ဘော်ဒါရဲ့ခါးကို..ချစ်ချစ်ကခြေထောက်တွေနဲ့ခွလိုက်ရင်း… လီးသွင်းတဲ့အချိန်မှာ..ဖင်တွေကိုကော့တင်ပေးလိုက်လုပ်ပေးနေတာ။ “အားကိုကိုရာ…တကယ်ထိတယ်ကွာ… စောက်ဖုတ်ထဲကိုအဆုံးထိဝင်တယ်ကွာ..သားအိမ်ကိုတောင်လာလာထိတယ်သိလား… မိုက်တယ်ကွာ..အား..အား..တကယ်မိုက်တယ်ကွာ…အားမရတော့ဘူး…ကျမခြေထောက်တွေကိုဆွဲပေးထားမယ်…နို့တွေကိုဆွဲပြီး… ဆောင့်လိုးပေးစမ်းပါ…” “အား…အမလေး..ဟုတ်တယ်…အဲလိုဆောင့်ခိုင်းတာ..ကောင်းလိုက်တာ…ဆောင့်ဆောင့်…” ချစ်ချစ်ကခြေထောက်တွေကို…ပခုံးထိအောင်ဆွဲတင်လိုက်တော့…ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကမွှေ့ယာနဲ့လွတ်ပြီး… ဖင်တွေပိုကော့လာတယ်။စောက်ဖုတ်လဲပိုကော့လာတယ်။ဘော်ဒါလဲ..မွှေ့ယာပေါ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပဲထောက်ထားပြီး…
နောက်လက်တစ်ဖက်ကနို့တွေကိုညှစ်ရင်း…ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတာဆီးခုံချင်းရိုက်မိလို့ထွက်လာတဲ့..’ဖတ်ဖတ်’ဆိုတဲ့အသံတွေ… အရေတွေရွှဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ထဲ..လီးဝင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ထွက်တတ်တဲ့ ‘ပျစ် ပျစ် ပလွတ် ပလပ် ‘ဆိုတဲ့အသံတွေရော… ချစ်ချစ်ရဲ့’အား…အား…ကောင်းလိုက်တာ…အရမ်းကောင်းတာပဲ…အား…ဆောင့်လိုးပေးစမ်းပါ…စောက်ပတ်ထဲမှာပြည့်ကျပ်ပြီး… အီစိမ့်နေတာပဲ…လိုးလိုးဆောင့်လိုးလိုက်စမ်းပါလို့အော်နေတဲ့အသံတွေနဲ့ပွတ်ပွတ်ကို ညံနေတာ။ ကျနော်လဲ… ချစ်ချစ်ဘေးနားတိုးသွားပြီး…နှုတ်ခမ်းလေတွေကိုနမ်းရင်း…နို့သီးလေးတွေကိုညှစ်နေပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့… သူ့မျက်နှာပေါ်ကန့်လန့်မှောက်လိုက်ပြီး…နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲကိုလီးထိုးထည့်ပြီး…ပါးစပ်ကိုလိုးနေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ချစ်ချစ်က..လီးကိုပါးစပ်ကနေဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း … “ဟိုလူကြီး…ရှင်ပက်လက်အိပ်လိုက်… ကျမအပေါ်ကနေတက်ဆောင့်မယ်…ကိုကိုကမတ်တပ်ရပ်လိုက်..ဆက်စုပ်ပေးမယ်နော်”
ကျနော်တို့လဲ…ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေရာတွေပြင်လိုက်ကြပြီး… ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတက်ခွလိုက်တယ်။ဘော်ဒါရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး… သူ့နို့တွေပေါ်တင်ပေးလိုက်တာနဲ့..ဘော်ဒါကလဲနို့တွေကိုညှစ်တော့တာပဲ။ ချစ်ချစ်ကတက်သာခွထားတာ… လီးကိုမသွင်းသေးပဲ..ကိုင်ထားပြီး..စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်းပွတ်နေသေးတယ်။ကျနော်လဲဘေးနားထိုင်ပြီး… ချစ်ချစ်ဖင်တွေကိုညှစ်နေလိုက်တယ်။ဖင်ပေါက်လေးကိုလည်း..ပွတ်ပွတ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ချစ်ချစ်က..စောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးသွင်းပြီး…အပေါ်အောက်ဖြေးဖြေးချင်းစဆောင့်တယ်။စောစောကလီးကိုကိုင်ထားတဲ့လက်က… သူ့အစိကိုသူပွတ်နေသေးတာ။ကျနော်လဲ…သူ့ဖင်ပေါက်ထဲကို…လက်တစ်ချောင်းသွင်းပြီး…အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေလိုက်တယ်။ ချစ်ချစ်ကဆောင့်တာတွေမြန်လာတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ဆီးခုံချင်းကပ်ပွတ်နေတာ။ချစ်ချစ်နို့တွေကိုကိုင်နေတဲ့..ဘော်ဒါရဲ့လက်တွေက လည်း…ခါးကိုကိုင်ပြီးဆွဲဆောင့်ချနေသလို..အောက်ကနေလဲကော့ကော့ပြီးလိုးနေတာ။
ချစ်ချစ်ရဲ့လက်တွေက…တစ်ဖက်ကသူ့နို့တွေကိုညှစ်နေပြီး…တစ်ဖက်ကသူ့အစိကိုသူပွတ်နေတာနဲ့… ကျနော်လဲနို့တစ်ဖက်ကို..ညှစ်ပေးနေလိုက်တယ်။နောက်တစ်ဖက်က..ဖင်ပေါက်ကိုနှိုက်လိုက်.ဖင်တွေကိုညှစ်လိုက်လုပ်ရင်း….ချစ်ချစ် ဆောင့်တဲ့အချိန်တွေမှာ..ကူတွန်းပေးနေလိုက်တယ်။ “အား ကောင်းလိုက်တာကွာ ချစ်ချစ်ပြီးချင်လာပြီ” ပြောလည်းပြော… သူ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုဘော်ဒါရဲ့လီးကြီး အဆုံးသွင်းပြီး…ဆီးခုံခြင်းကပ်ပွတ်နေတယ်။ဖင်ထဲကိုထည့်ထားတဲ့လက်ချောင်းကိုလည်း… စအိုဝကညှစ်နေတာကိုခံစားလာရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ…အောက်ကဘော်ဒါကလည်း…အောက်ကနေကော့တင်ရင်း… “ပြီးပြီ… ပြီးသွားပြီ”လို့ပြောရင်းချစ်ချစ်ရဲ့ခါးကိုဖက်ထားတဲ့လက်တွေပြေကျသွားတယ်။ ချစ်ချစ်က”နေအုံးလေ…ချစ်ချစ်မပြီးသေးဘူး… တောင့်ထားအုံးလေ”..ပြောရင်း…ပြန်ဆောင့်မလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ…ဘော်ဒါရဲ့လီးကပျော့ခွေပြီး…စောက်ဖုတ်ထဲကနေကျွတ်သွားတယ်။
ချစ်ချစ်ကသူပြီးတော့မယ့်အချိန်မှာ…သူ့အရင်ပြီးသွားတဲ့ဘော်ဒါကို…မကျေမနပ်တွေနဲ့ပြောရင်း… ရင်ဘတ်ကိုလဲလက်သီးနဲ့ထုနေသေးတယ်။အဲဒီချိန်ထိ…ဘော်ဒါကအောက်က…ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာ… လေးဘက်ထောက်ရက်သား။ ချစ်ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်လေးက…ဘော်ဒါရဲ့လီးကြီးခုမှကျွတ်သွားတာဆိုတော့…ပြဲပြီးအာနေတာ..အထဲကအတွင်းသားတွေတောင်မြင်နေရတာ။ကျနော်လဲ….ဘာမှဝင်မပြောဘဲလွှတ်ထားလိုက်တယ်။ထုလို့ရိုက်လို့အား ရသွားတော့မှ..ချစ်ချစ်ကဘေးကိုလှိမ့်ဆင်းလာတယ်။ကျနော်လဲချစ်ချစ်ဘေးမှာ…ဝင်လှဲလိုက်ပြီးချစ်ချစ်ကို ဖက်ထားလိုက်ရင်း… “ချစ်ချစ် ပြီးသွားအောင် ကိုကို ဆက်လုပ်ပေးရမလား” လို့မေးလိုက်တယ်။
“နေအုံးကွာ…ကိုကို့အတွက်သီးသန့်အစီအစဉ်ရှိတယ်လေ…ဟိုလူကြီးကိုချစ်ချစ်တင်းနေတာ…သူ့ကိုအပြစ်ပေးရမယ်..” ကျနော်နဲ့ချစ်ချစ်စကားပြောနေတုံး…ဘော်ဒါလဲရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်သွားရာကနေပြန်ရောက်လာတယ်။ “ဘာတွေများ… အပြစ်ပေးမလို့လဲချစ်ချစ်ရဲ့..ကျနော်ဘာတွေများအမှားလုပ်မိလို့လဲ ” “ရှင့်ကိုယ်ရှင်မသိဘူးလား… သူများကပြီးတော့ပါမယ်ဆိုတာကိုမစောင့်ဘူးလေ…တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားကြီး” “ဆောရီးပါချစ်ချစ်ရယ်… ချစ်ချစ်ရဲ့အထိအတွေ့ကအရမ်းကောင်းတော့ ကျနော်လဲ..မထိန်းနိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်” “အဲလိုပြောယုံနဲ့ကျေနပ်ရမှာလား… ” “ချစ်ချစ်ပေးသမျှအပြစ်ကိုခံပါ့မယ် ..ကျေနပ်ပြီလား.. ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမှာလဲ…ပြောပါအုံး ” “ကဲလာ..ချစ်ချစ်ဖင်ကိုယက်ပေး…ဘယ်မှမကိုင်ရဘူး” ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါကိုပြောရင်း..ကျနော့်ကိုဆွဲပြီးနှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေလိုက်တယ်။ဘော်ဒါကတော့ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း..ဒူးထောင်ပေါင် ကားပေးပြီး..ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ချစ်ချစ်အောက်ကနေ..ဖင်ဝလေးကိုယက်ပေးနေတာ။ တခြားယောက်ျားတစ်ယောက်က… ဖင်ကိုယက်ပေးနေတာခံရင်း..ကျနော့်ကိုနမ်းနေရလို့ထင်တယ်။ချစ်ချစ်ရဲ့အနမ်းတွေက…ပြင်းရှလွန်းနေတယ်။လက်တစ်ဖက်က… ကျနော့်ဒုတ်ကိုလာကိုင်ပြီး..လက်တစ်ဖက်ကသူ့ပိပိကိုပွတ်လိုက်..အစိလေးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ။ခဏနေတော့ချစ်ချစ်ကခွာလိုက်ပြီး …“ဟိုလူကြီး…အဲဒီမှာပက်လက်လှန်လိုက်” ဆိုပြီး…ဘော်ဒါကိုလှမ်းပြောတယ်။ဘော်ဒါလဲပက်လက်လှန်လိုက်တော့…ချစ်ချစ်ဘော်ဒါရဲ့ အပေါ်ကနေ..ပြောင်းပြန်တက်ခွလိုက်ရင်း. .. “ရှင်က… အောက်ကနေပိပိကိုယက်ပေး။ကိုကိုက..ချစ်ချစ်ကိုဖင်ချပေးကွာ။ဖင်ခံနေရင်းနဲ့စောက်ဖုတ်အယက်ခံချင်လို့”
” ချစ်ချစ်ကလဲ..ဘော်ဒါကအောက်မှာလေမကောင်းပါဘူး” “ကောင်းပါတယ်ကိုကိုရ…သူ့ကိုအပြစ်ပေးတာလေ… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့…အရေတွေနဲ့သူ့ကိုပွတ်ပစ်မှာ..ဟိုလူကြီး..ရှင်လက်မခံ ချင်ရင် ရတယ်နော်” “ချစ်ချစ်က…ရှင်နဲ့နောက်ပေါက်ကိုမြည်းဖို့..စဉ်းစားထားတာ လက်မခံဘူးဆိုရင်ပြန်လိုက်တော့..ဘယ်လိုလဲ” ” ချစ်ချစ်..ဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်ပါ့မယ်လို့ပြောပြီးသားပဲလေ.. ဒါမျိုးဆိုလို့ကတော့လာထားပဲ ” “အဲဒါဆိုယက်တော့လေ… ကိုကိုဖင်ချလို့ရအောင်..ဖင်ကိုဖြဲပေးထားအုံး” ဘော်ဒါက… ချစ်ချစ်စောက်ဖုတ်ကို..ပင့်ယက်လိုက်ရင်းဖင်ကိုဖြဲပေးလာတယ်။ကျနော်လဲချစ်ချစ်ခါးကိုကိုင်… ဖင်ဝမှာလီးတေ့လိုက်ပြီးဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်မှာ..စောစောကဘော်ဒါယက်ထားတဲ့တံတွေးနဲ့… စောက်ဖုတ်ကစီးကျထားတဲ့အရေတွေနဲ့ဆိုတော့….ဂျယ်သုတ်စရာတောင်မလိုပဲချောချောရှူရှူပဲဝင်သွားတယ်။
ချစ်ချစ်ခါးလေးကိုကိုင်ပြီး…ဖင်ကိုဖြေးဖြေးပဲလိုးနေလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်က “ကောင်းလိုက်တာကွာ….အရင်ကကိုကိုဖင်လုပ်ရင်ရှေ့ကအရမ်းယားတာ…ခုတော့အောက်ကနေယက်ပေးနေတော့…မိုက်တယ်ကွာ ” “ဟိုလူကြီး…မြန်မြန်ယက်ပေးကွာ…ပြီးတော့မယ်” “ကိုကိုလဲမြန်မြန်လုပ်ပေးကွာ… ပြီးချင်လာပြီ ”’ ချစ်ချစ်ကပြောလာတာနဲ့…ကျနော်ကိုယ်ပေါ်ကနေခွပြီး..ဖင်ကိုသွက်သွက်လေးလိုးပေးလိုက်တယ်။ “အားအား..ပြီးပြီကောင်းလိုက်တာအား..အရေတွေထွက်ကုန်ပြီ…” ချစ်ချစ်ရဲ့ကိုယ်လုံးလေး..တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီးတော့… ဘော်ဒါရဲ့မျက်နှာပေါ်ကို..သူ့စောက်ဖုတ်နဲ့ဖိပွတ်နေတာ။ဖင်ထဲထည့်ထားတဲ့လီးတောင်ကျွတ်သွားတယ်။ကျနော်လဲချစ်ချစ်ကို… အသာလှဲခိုင်းလိုက်ပြီး..ဖက်ထားလိုက်ရင်းသူ့ကျောလေးကို…ဖွဖွလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်။သူ့နဖူးလေးကိုလဲနမ်းနေလိုက်ရင်း … “ကောင်းလားဟင် ချစ်ချစ် ” “အင်းတော်တော်ကောင်းတယ်” “နားချင်ပြီလား” ” ခဏတော့နားမယ်လေ ” “ချစ်ချစ်ကိုမေးချင်တာလေးရှိလို့” ” မေးလေ..ကိုကို” “စောစောက..ချစ်ချစ်ကိုကိုသူငယ်ချင်းကို..ပြောနေတာလေ
သူနဲ့နောက်ပေါက်ကိုမြည်းမလို့ဆိုတာလေ..အဲဒါတစ်ကယ်ပြောနေတာလား ” “အင်းပေါ့ ကိုကိုရဲ့ ဘာလဲကိုကိုက မကျေနပ်ဖူးလား” “မဟုတ်ပါဘူး..ချစ်ချစ်ရဲ့ဟိုကောင့်ဟာက..ကို့ဟာထက်ကြီးတော့…ချစ်ချစ်နာမှာစိုးလို့ပါ ” “အဲဒါကြောင့်….မြည်းကြည့်ချင်တာလေ..အရသာတော့ ရှိမှာသေချာတယ်..ခိခိ ” “အော်… တော်တော်အရသာရှိချင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လား…အဲဒါဆိုပိုပြီးအရသာရှိသွားအောင်..ရှေ့ရောနောက်ရောတပြိုင်တဲလုပ်ချင်တယ်… ဘယ်လိုလဲ ” “ကောင်းတာပေါ့…ချစ်ချစ်လဲအဲလိုစမ်းကြည့်ချင်နေတာ… ပြောရမှာရှက်လို့..ခိခိ…အရင်ကကိုကိုနောက်ကိုလုပ်ရင်း.. ရှေ့ကိုအတုနဲ့လုပ်ပေးတာတောင်..ဒီလောက်ကောင်းတာ ” “ခုဟာက..အစစ်ဆိုတော့..ဟိဟိ..ပြောရင်းနဲ့ရင်ခုန်လာပြီ… ရှေ့ရောနောက်ရောရွစိရွစိဖြစ်လာပြီ…ခိခိ…” “ကဲ… ဘယ်လိုအဲဒါဆိုစမှာလဲ…ကိုကိုတို့ကချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလုပ်မှာ” “အဲဒါဆို ဒီလိုလုပ်မယ်လေ…ဟိုလူကြီးနဲ့နောက်ပေါက် အရင်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်…ပြီးတော့မှကိုကိုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့… ဟိုလူကြီးနောက်ပေါက်ကိုသွင်းနေတုန်း..ကိုကိုကပိပိလေးကိုပွတ်ပေးနေနော်….” “အင်းပါ…ချစ်ချစ်ရဲ့ပိပိလေးကိုလဲပွတ်ပေးမယ်…ချိုချိုလေးကိုလဲပွတ်ပေးမယ်…ကိုကိုမိန်းမလေးကောင်းအောင်…ကိုကိုအကုန်လုပ်ပေးမှာ ” “ချစ်ချစ် ရေသွားဆေးလိုက်အုံးမယ်”
ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ချစ်ချစ်က…ကုတင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်တက်လာရင်း… “ဟိုလူကြီး… ချစ်ချစ်ကိုနောက်ပေါက်တွယ်ချင်နေတာမလား..ချစ်ချစ်ရဲ့ဖင်ကိုလာယက်ပေးအုံး…ရှင့်ဟာက…ကိုကို့ဟာထက်ကြီးတော့… ခံနိုင်အောင်သေသေချာချာလုပ်ထားမှဖြစ်မှာ..လျှာနဲ့ပါထိုးပေးနော် ” ဆိုပြီးကုန်းပေးလိုက်တယ်။
ဘော်ဒါလဲချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲ…အစိလေးကိုလက်နဲ့ပွတ်ပြီး… စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်ကိုသေချာယက်ပေးနေတဲ့အပြင်..ဖင်ထဲကိုပါလျှာနဲ့ထိုးထည့်နေတာတွေ့နေရတယ်။ပြီးတော့… စောက်ဖုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့အရေတွေကို…လက်နဲ့ယူပြီးဖင်ဝမှာပွတ်ပေးလိုက်…လက်နဲ့ထိုးပေးလိုက်လုပ်နေတာ။ “အား…လုပ်တော့ကွာ..ချစ်ချစ်လိုချင်နေပြီဖြေးဖြေးပဲသွင်းနော်…ရှင့်ဟာကြီးကအကြီးကြီးပဲ…ဖင်ကွဲသွားအုံးမယ်” “အင်းပါ….ချစ်ချစ်ရဲ့ဖြေးဖြေးပဲလုပ်မှာပါ…နာရင်ပြောနော်..” ချစ်ချစ်ကဖင်ဘူးတောင်းထောင်နေအောင်..ကုန်းပေးလိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖင်ကိုဖြဲပေးထားတယ်။ဘော်ဒါက..ချစ်ချစ်နောက်မှာ..ဒူး ထောက်လိုက်ရင်းချစ်ချစ်ဖင်ဝမှာ..သူ့လီးကိုတေ့လိုက်ပြီးသွင်းလိုက်တာ..ထိပ်ဖူးကြီးကအဝမှာတင်းပြီးတော့မှ… ဖင်ထဲကိုဝင်သွားတာတွေ့နေရတယ်။ ထိပ်ဖူးကြီးဝင်သွားရော…ချစ်ချစ်ဖင်ဖြဲပေးထားတဲ့သူ့လက်ကို… စောက်ဖုတ်ဆီပြောင်းပြီးသူ့ဟာသူပွတ်နေတာ။ဘော်ဒါ လဲဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့…သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံးချစ်ချစ်ဖင်ထဲ…ဝင်သွားရောကပ်ပြီးပွတ်ပေးနေတယ်။
ချစ်ချစ်ဆီကတော့ “ကြပ်ကြပ်ကြီးကွာ…ဖင်ထဲကိုပြည့်နေတာပဲ…တစ်ဆို့နေတာပဲ…ရင်ဘတ်ထဲထိတောင်… ရောက်တယ်။အား..ကျွတ်ကျွတ်နဲ့” အသံတွေကိုစုံနေတာ။ ”ကောင်းလိုက်တာဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး” ဆိုတာကလဲပါသေးတယ်။ဘော်ဒါလဲချစ်ချစ်ခံနိုင်လာပြီထင်မှ…ဆွဲထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ဖြေးဖြေးလုပ်နေတယ်။ချစ်ချစ်က “ကောင်းလိုက်တာ…ကျမအပေါ်ကနေချင်သေးတယ်။ ရှင်ဒီအတိုင်းပက်လက်လှန်လိုက်ပြောပြီး..” နေရာပြောင်းလိုက်တော့..ချစ်ချစ်ကဘော်ဒါရဲ့အပေါ်မှာကျောပေးရက်သားပေါ့။ ဘော်ဒါရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်နှစ်ဖက်ကို..ပြောင်းပြန်လက်ထောက်လိုက်ရင်း..သူ့ဟာသူစိတ်ကြိုက်လှုပ်ရှားနေတယ်။ကျနော်လဲ..သူတို့ အောက်ကနေသွားကြည့်တော့..ဘော်ဒါရဲ့လီးကြီးက..ချစ်ချစ်ဖင်ထဲဝင်နေတောရော..ချစ်ချစ်ရဲ့ညီမလေးကအရည်တွေရွှဲပြီး… အောက်ကိုစီးကျနေတာရော..သေချာမြင်နေရတာ။ ကျနော်လဲ…ချစ်ချစ်နားကိုတိုးသွားပြီးနှုတ်ခမ်းလေးကို.. နမ်းလိုက်ရင်းစောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တော့… “ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်..အစိလေးကိုပါပွတ်ပေးပြီး အထဲကိုပါ နှိုက်ပေးအုံး ” ချစ်ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ချစ်ချစ်ဘယ်လောက်တောင်..ကောင်းနေလဲဆိုတာ..နှိုက်နေတဲ့လက်ကိုပါ စောက်ဖုတ်ကညှစ်ပေးနေတာ။ချစ်ချစ်က “ကိုကို လုပ်တော့ကွာ ရှေ့က အရမ်းယားနေပြီ ‘” ‘ပြောတာနဲ့ ခွေထဲကအတိုင်း..သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီးစောက်ဖုတ်ထဲကိုသွင်းလိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်ကဝင်လာတဲ့လီးကို..ညှစ်ပေးနေတာများကောင်း လိုက်တာ။အောက်ကဘော်ဒါကလဲကော့ပေးနေတော့…သူ့လီးဝင်ထွက်နေတာကိုပါစောက်ဖုတ် ထဲကနေသိနေရတယ်။
ချစ်ချစ်ကတော့..ကောင်းလွန်းလို့ဆိုပြီး….ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိတော့အောင်ရေရွတ်နေတာ။ခဏနေတော့..ချစ်ချစ်ကနေရာပြောင်းပြီး..ဘော်ဒါရဲ့လီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲထည့်..ကျနော်ကဖင်ကိုလိုးပေါ့။ကျနော်ကအောက်ရောက်လိုက်…ဘော်ဒါကအောက်ရောက်လိုက်နဲ့…နှစ်ယောက်ညှပ်ပြီးလိုးနေတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ချစ်ချစ်လဲ… ဘယ်နှခါမှန်းမသိအောင်ပြီးတာတဲ့။နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းကိုကျနော်တို့နှစ်ယောက်..တပြိုင်နက်ဆောင့်လိုးလိုက်ပြီးသိမ်းလိုက်ကြတာ။ကျ နော်ကဖင်ကိုချနေရင်း…ဆိုတော့ချစ်ချစ်ဖင်ထဲမှာ..အရေတွေပန်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။အကုန်မောလို့အိပ်တော့မယ့်အချိန်က… စနေနေ့မနက်တောင်ရောက်ခါနီးနေပြီ….. ပြီးပါပြီ….။
မမ မ နေ နို ငျ တော့ ဘူး